Searchုမြန်မာအပြာကား - BajarFB.com
Search Results -ုမြန်မာအပြာကား
"တစ်ယောက်ကလျှော် တစ်ယောက်ကတိုက်" (ပညာပေး , ဟာသ , ၁၈+) Actor - Zaung Nyi , Nay Myo Thura , Tawthar Tawthar Writer - သန်၎ကို https://www.youtube.com/watch?v=vM6adcvvvR4&feature=youtu.be Tachileik Funny Guys 29 Nov 2017 · 4.1M views
Inoué is too shy to hugawoman. In Japan's Cuddle Cafés he can soothe his loneliness for money. DW Stories 26 Jun 2018 · 3.2M views
"သူကွီးသားမကျ ဇီးထနျးလြှကျ" ဗီဒီယိုဇာတျကား ရိုကျကှငျး
ဇနျနဝါရီလ (၁၈) ရကျနကေ့ ရနျကုနျ၊ သင်ျဃနျးကြှနျးရှိ ရိုကျကှငျးအိမျမှာ ဒါရိုကျတာ အောငျဟိနျး ၏ (ဖနျတီးမှု) ရိုကျကူးပုံဖျောနတေဲ့ "သူကွီးသားမကျ ဇီးထနျးလြှကျ" ဗီဒီယိုဇာတျကား ရိုကျကှငျးမှ ကြျောရဲအောငျ၊ နရေိနျး၊ တက်ကသိုလျဂှမျးပုံ၊ သိနျးစံ၊ ပိုးဝတီစံ တို့နှငျ့ ခဏတာ။ Kyaw Ye Aung, Nay Rain, Gone Pon and Poe Wati San star in "Thu Gyi Tha Matt Zee Htan Hlyat" movie by director Maung Hein. #KyawYeAung #MyanmarMovie Myanmar Celebrity 19 Jan 2018 · 80K views
##### ရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့ လိင်မဆက်ဆံခင်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ဖို/မ လိင်အဂါင်္တွေကို ဆေးကြောရတဲ့ POWER SOAP ကျားမ ၂ဦးစလုံး အခါ ၄၀ ကျော်စီ ဆေးကြောနိုင်တဲ့ စက္ကူ ဆပ်ပြာ ဘူးကို ( 30 -4- 2018 ) ကစပြီး အောက်မှာရေးပေးထားတဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ တစ်ဘူးကို ၃၆၀၀ ကျပ် တည်း နဲ့ ဝယ်လို့ရပါပြီ ! ဒါမျိုး သောင်းချီတန် ဆေးတွေ သိန်းချီဖိုး အခမဲ့ အစမ်းပေးသုံးပြီး လက်တွေ့သိသာမှုတွေကို အင်တာဗျူုး မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေရှေ့မှာ ရဲရဲကြီးချ ပြနိုင်တာ မြန်မာ့ဆေးသမိုင်းမှ SKY LARK ကလွဲလို့ မှတပါး အခြား လုံးဝ မရှိ ပါဘူး ! အိမ်ထောင်သက် ၁၀ နှစ်ကျော်ထိ ဆေးအမျိုးမျိုးသုံး နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ကုခဲ့ပေမဲ့လည်း သားသမီးရတနာ မထွန်းကားခဲ့ တစ်ဦး ဆေးအစမ်း လာသောက် / လိမ်းရင်း အမျိုးသမီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန် ရသွားပါတယ် ! မနှစ်က မန္တလေး မှာ လုပ်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ် ရန်ကုန် မှာ လုပ်ပါတယ် ! လာမဲ့ နှစ်မှာ မော်လမြိုင် မှာ လုပ်ဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ် ! POST မှာ ခုရေးထားတာတွေ အစအဆုံး ဖတ်ပြီး အင်တာဗျူုး Video လေးကို အစအဆုံးသေသေချာချာ ကြည့်လိုက်ရင် သင့်အတွက် အများကြီး အကျိုးရှိစေရမယ် ဆိုတာကို ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ် ! အားလုံး HAPPY NEW YEAR ပါ ! အားလုံးအတွက် မင်္ဂလာရှိသော ၊ စီးပွားရေးဖြစ်သော ၊ အလှုဒါန ပြုပြီး တရားဘာဝနာပွားများ နိုင်သော နှစ်ကောင်း ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ! HAPPY NEW YER , လွတ်လပ်ရေးနေ့ ၊ ပြည်ထောင်စုနေ့ ၊ ဗိုလ်ချူ ပ်မွေးနေ့ ၊ Valetine's Day နဲ့ တပ်မတော်နေ့ တွေကို ဂုဏ်ပြု ကြိုစိုတဲ့ အနေနဲ့ လာမဲ့ မိတ်လ ကုန်အထိ SKY LARK က အောက်မှာ ရေးပြထားသလို ပရိုမိုးရှင်း လက်ဆောင်တွေ ပေးထားပါတယ် ! ■ ပါဝါဟန်းနီး ၂ ဘူးဝယ်ရင် ၁၅ မိနစ်အတွင်း အသားဖြူ ခရင်မ် မျက်နှာလိမ်း ( Face Glo ) သို့ ကိုယ်လိမ်း ( Body Glo ) သို့ ဂျိုင်းကြား ပေါင်ကြား လိမ်း ( Inner Glo ) တစ်ဘူး လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ် ■ ပါဝါဟန်းနီး တစ်ဘူး ပါဝါလိုးရှင်း တစ်ဘူး ဝယ်ရင် 13500 ကျပ်တန် ညလိမ်း အသားဖြူ အသားချော EVER GLO လိုးရှင်း တစ်ဘူး လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ် ■ ONE COURSE = ပါဝါဟန်းနီး ၃ ဘူး ပါဝါလိုးရှင်း ၂ ဘူး တခါတည်း ဝယ်ရင် 13500 ကျက်တန် Ever Glo တစ်ဘူး နဲ့ 18000 တန် အမျိုး သမီးသုံး P-V Care Gel တစ်ဘူး လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ် ##### ရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့ လိင်မဆက်ဆံခင်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ဖို/မ လိင်အဂါင်္တွေကို ဆေးကြောရတဲ့ POWER SOAP ကျားမ ၂ဦးစလုံး အခါ ၄၀ ကျော်စီ ဆေးကြောနိုင်တဲ့ စက္ကူ ဆပ်ပြာ ဘူးကို ( 12 -2- 2018 ) ကစပြီး အောက်မှာရေးပေးထားတဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ တစ်ဘူးကို ၃၆၀၀ ကျပ် တည်း နဲ့ ဝယ်လို့ရပါပြီ ! ====================================================== =============================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! =============================================== အနံ့ အသက်လုံးဝ မရှိဘဲ သန့်ရှင်း မွေးကြိုင်နေတဲ့ ယောင်္ကျား တန်ဆာ ကိုမှ မိန်းမတွေက ခံစားမှု အပြည့်အဝ နဲ့ စိတ်ပါကြတယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား ???? ကြီးတာ သေးတာထက် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်း ကျန်းမာမှု ရှိပြီး တဘက်သားရဲ့ ဆန္ဒ ကို အရင်ပြည့်ဝ ပေးနိုင်တဲ့ အထိ တောင့်ခံ နိုင်မှု ရှိဖို့က အရေးအကြီး ဆုံးပါ ! " ပါဝါ လိုးရှင်းကို စသုံးလိုက်တာနဲ့ ကူဆက်ရောဂါ အန္တရာယ် တွေအတွက် 99% စိတ်ချရမှာဖြစ်ပြီး တပတ်အတွင်း သင့် လိင်အင်္ဂါ အနံ့ အက်ကင်းစင် မွေးကြိုင်လာစေပြီး နဂိုထက် သိသိသာသာ ဖြူ ဝင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ် ! တစ်လ အတွင်း သုတ်လွှတ် မြန်တာကို ပျောက်ကင်းသွားစေမှာ ဖြစ်ပြီး ၆ လ ကနေ တစ်နှစ်အတွင်း သင့်လိင်အင်္ဂါ ကို ထွားကြိုင်း ရှည်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ! ခု လိမ်း ခု ရှည် ခု ထွားစေတဲ့ အန္တာရာယ် အင်မတန်ကြီးတဲ့ တပွဲထိုး ဆေးတွေကို ရောဂါ ဖြစ်မှာ မကြောင်ဘဲ သုံးချင်သူများ ဒီ POST ကို ကျော်သွား နိုင်ပါတယ် ! SKY LARK က တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ " ပါဝါ လိုးရှင်း " ကတော့ 100% သဘာဝ ဆေးဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝ မရှိဘဲ ရေရှည်မှာ အန္တရာယ် ကင်းကင်း နဲ့ လက်တွေ့ သိသာတယ် ဆိုတာကိုတော့ ရဲရဲကြီး အာမခံပေးနိုင်ပါတယ် ! =============================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ် လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! =============================================== " ပါဝါဟန်းနီး " သောက်သူတိုင်းက ဆေးကို အလွန်ကြိုက်ကြပြီး အနံ့ နဲ့ အဝင်ဆိုးတာ မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလာကြသူတွေ ရှိလို့ ခု အ နံ့ မွှေးပြီး အရသာလေးကောင်းအောင် ပြန်ပြု ပြင်ထားပါတယ် ! လူငယ် လူကြီး တော်တော်များများ ဟာ ခုလုပ် ခုချက်ချင်းအစွမ်းပြ ဆိုတာတွေကိုသာ ပညာမဲ့စွာ ကြိုက်နေကြလို့ ကြီး ဆေးထိုးကြ ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုဗေဒ လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းကြပြီး တစ်လလောက်ဘဲ သာယာမှုကို ရကြပြီး ဘေးထွက်ဆိုကျိုးတွေကိုမရှူမလှ ခံစားနေကြရပါတယ် ! အလကားပြောနေတာ လို့ ထင်နေရင် အဲဒါတွေကို စိတ်ကြိုက်ငွေကုန်ခံပြီး အရင် လုပ်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး ! နောက်ဆုံး ဒုက္ခတွေ အမျိုးမျိုးရောက်ပြီး ဘာတစ်ခုမှ စိတ်အလိုကျ ဖြစ်မလာဘူး ဆိုရင် ခု ပိုမို အစွမ်းထက်အောင် ပြု ပြင်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ " ပါဝါလိုးရှင်း " လိမ်းဆေးကို အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ ! ဘေးထွက် ဆိုကျိုး လုံးဝ မရှိတဲ့ 100% သဘာဝ ဆေးဖြစ်လို့ ခုလိမ်း ခုချက်ချင်းတော့ ဖြစ်မလာပါဘူး ! ဒါပေမဲ့ ၆ လ နဲ့ ၉ လ အတွင်း သင်မှန်းပြီး လိုချင်နေတဲ့ အတိုင်းအတာထက် ပိုပြီး စွမ်းရမယ် ဆိုတာတော့ လုံးဝ အာမခံပါတယ် ! တစ်သက်လုံး ဘေးကင်းပြီး စိတ်တိုင်းကျ သာယာ နိုင်ဖို့ ၉ လ လောက် အချိန်ပေးရတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘဲ တွက်တွက် တန် မှတန် ပါဘဲ ! ================================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ် လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! =============================================== ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး တည်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တည်ဆောက်ဖို့ ကောင်းမွန် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖိုမ ဆက်ဆံရေး ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး သုခ ကို ၂ ဘက်စလုံး ရကြဖို့ အထူး အရေးကြီးပါတယ် ! အဲဒီ အတွက် ၂ ဘက်စလုံးက အဓိက ဟာတွေ ကျန်းမာရေး ကောင်းနေဖို လိုအပ်ပါတယ် ! ၂ ယောက်စလုံး အမြဲ သန်. ရှင်းမွှေးကြိုင်ပြီး ကျန်းမာ သန်စွမ်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နှစ်လိုဖွယ် အဓိက ဟာတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ ? သတိ - ကျန်းမာရေး အနေနဲ့ဖတ်ပြီး ရိုင်းဆိုင်းခြင်း မပြုပါရန် အထူးမေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည် ! ယောင်္ကျားများအတွက် ************ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက် ၂၀ နဲ့ ၄၀ ကြား လူငယ် 20% နဲ့ အသက် 40 နဲ့ 60 ကြား လူလတ်ပိုင်း 80% တွေဟာ ယောင်္ကျား ဟိုမုန်းဓာတ် မှတ မှန်ကန်မှု မရှိကြတဲ့အတွက် ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်း စတဲ့ ရောဂါတွေကို ခံစားနေရပါတယ် ! အသက် ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဲလို ဖြစ်နေကြသူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း ၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း ၊ လူတောမတိုးရဲခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို အားမရခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိခြင်း ၊ အလုပ်စိတ်မဝင်စားခြင်း စတာတွေ ကို ပါ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ခံစားနေကြရပြီး ထွက်ပေါက်တွေ အနေနဲ့ တချို့က လောင်းကစားသမား ၊ တချို့က အရက်သမား ၊ တချို့ က မိန်းမ အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင်ကောင်းလာမလားဆိုပြီး KTV , Club တွေ မှာ အချိန်ကုန်ငွေကုန် ဖြုန်းသူတွေ ဖြစ်လာကြရုံမက တချို့က စိတ်ဓာတ်တွေ တအားကျပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် သွားကြတဲ့ သာဓက ဖြစ်ရပ်တွေ ကမ္ဘာတဝှမ်း မှာ အများကြီး ရှိပါတယ် ! တချို့ ယောင်္ကျားတွေက ကျန်တာတွေ အကုန်ကောင်းနေပြီး သုတ်ရည်မှာ သုတ်ကောင်အရေအတွက်ပါဝင်မှု နည်းနေလို့ ကလေး မရနိုင်တာတွေလည်း ရှိကြပါတယ် ! ခု SKY LARK က တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ထုတ်တဲ့ 100% HERBAL ( သဘာဝ ) တိုင်းရင်းဆေး " ပါဝါဟန်းနီး " က အထက်ဖော်ပြပါ ဝေဒနာ တွေ ကို ဘာမှဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေဘဲ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမဲ့ ဆေးကောင်းတလက်ပါ ! "ပါဝါ လိုးရှင်း " ကိုတော့ ယောင်္ကျာ အင်္ဂါကို အမြဲ ဖြူဝင်း မွေးကြိုင်နေစေပြီး ရောဂါ များ ကူခြင်း မှ ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် အင်္ဂါကြီးထွား သန်မာမှု ရှိရန် ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ထိမ်းနိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ! မိန်းမများအတွက် ********* ကမ္ဘာတဝှမ်း အမျိုးသမီး အများစု ဖြစ်နေကြတာကတော့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း ၊ ယားယံခြင်း နှင့် ယောင်္ကျား များနှင့် ဆက်ဆံ ခါ များလာသည့်အခါ အင်္ဂါ တွင်း နံရံများ ရော့တွဲလာကြသဖြင့် မိမိခင်ပွန်းမှ မိမိအပေါ် စိတ်ကြေနပ်မှု မရှိတော့ခြင်း စတာတွေက အဖြစ်များနေကြပါတယ် ! အဲဒါတွေ အားလုံး ကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေဖို့ " P-V Care " ကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ပြီး ခု 11 လ ပိုင်းထဲ မှာ ဈေးကွက်ထဲ စတင် ရောင်းချပေ နေပါတယ် ! နောက်မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာ P - V Care နဲ့အတူ အမျိုးသမီး အင်္ဂါက အမွေးတွေကို သဘာဝ နည်းနဲ့ အမြဲအတွက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်မဲ့ P-V clean အမွေးဖယ်ရှားဆေး ကိုပါ လက်ဆောင် ထည့်ပေးဖို စီစဉ်ထားပါတယ် ! pH - 4.5 ဖြစ်ပြီး မနက် တစ်ကြိမ် ည တစ်ကြိမ် အမျိုးသမီး အင်္ဂာ အတွင်းအပြင်မှာ လိမ်းပေးရုံနဲ့ ၄၅ ရက် အတွင်း အပျိုစင် ဘဝ က အခြေအနေ လေးကို ပြန် ပိုင်ဆိုင် နိုင်မှာပါ ! P-V Care 90ml - 18,000 ကျပ် =============================================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ============================================================== မှတ်ချက် ။ ။ အစ အဆုံး သေသေချာချာ ဖတ်ပေးပါ ! ဆေး အာနိသင် ဆေး အသုံးပြုပုံ ရရှိနိုင်သော မြို့များ ဆေးဆိုင်များ ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေး တို့တွင် အိမ်အရောက် မှာယူ လိုပါက ဆက်သွယ် ရမည့်ဖုန်းများ ...... အားလုံး အစုံအလင် အတိအကျ လိုလေးသေး မရှိ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ။ ( 10 - 10 - 2016 ) မှစပြီး မလေးရှား မှာ POWER HONEY = 80 RM , POWER LOTION = 105 RM ဝယ်လို့ရပါပြီ ! ဆက်သွယ်ရန် - Malaysia Damansara Jaya Ph - 01129043746 Malaysia Klang Ph - 0173031835 " ယောင်္ကျား အားမာန် POWER HONEY " --------------------------------------------------- တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် TMR - 013089(0118) နဲ့တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ====================================================== ယခု အခါ မြန်မာပြည် အနှံ့မြို့ ကြီးများ ရှိ ဆေးဆိုင်ကြီး များတွင် ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချ ပေးနေပြီး များမကြာမှီ မြန်မာပြည် တပြည်လုံး အနှ့ံ ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါတယ် ခင်ဗျား ! ပန်းသေ ပန်းညှိုး သုတ်လွတ်မြန်ခြင်း သွေးလည်ပတ်အား နည်းခြင်း များကို ရက်ပေါင်း ( 50 ) ၃ ဘူး သောက်ပြီး သွားသည်နှင့် လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားစေပြီး အနည်းဆုံး (6) လ မှ တစ်နှစ်အထိ ဘာဆေးမှ မှီဝဲ နေစရာ မလိုတော့ဘဲ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး သွက်လက် လန်းဆန်းသော 20 ကျော်အရွယ် လူငယ်လေးလို ပေါ့ပါး အားရှိ စေမှာဖြစ်ပါတယ် !6လ ( သို့ ) တနှစ် နေမှ လိုအပ်ပါက One Course3ဘူး ထပ်သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ! အလွန် အားနည်းပြီး နှစ်ရှည်ကြာ ပန်းသေ ပန်းညှိုး ဖြစ်နေသူများ ရွှေရောင်ဘူး ၃ ဘူး One Course သောက်ပြီးပါက အဖြူ ရောင်ဘူး One Course သောက် ရပါမည် ။ လိုအပ်သေးပါက အထက်ပါအတိုင်း တလှည့်စီ ၃ ကြိမ်ထိ သောက် နိုင်ပါသည် ။ ပြောတဲ့အတိုင်း မဖြစ်ရင် ငွေပြန်အမ်း ပါ့မယ် ! ဒီလောက်သေချာတဲ့အာမခံ ချက်ကို သင့်ကို အခြား ဘယ်ဆေးက ပေးနိုင်ပါသလဲ ??? ရပ်ကြည့် လို့ အမြတ် မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! ရန်ကုန် - 09 256070900 မန္တလေး - 09 73206348 ကိုဆက်လိုက်ပါ ! ဆိုင်တွေမှာ သွားဝယ်ချင်ရင် သင့်အိမ်နဲ့အနီးဆုံး ဆိုင်ကို ညွှန်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အိမ်အရောက်ပို့ စေချင်ရင် အိမ်အရောက် ပို့ ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ကျပ် တစ်ထောင် တည်းနဲ့ရနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား ! ပါဝါ ဟန်းနီး သောက်ဆေး တဘူး - 15000 ကျပ် ပါဝါ လိုးရှင်း လိမ်းဆေး တဘူး - 18000 ကျပ် အာမခံချက် အပြည့် အဝ ပေးထားလို့ခုဘဲ ဖုန်းဆက် စမ်းသုံး ကြည့် လိုက်ပြီး သင့်ဘဝ ထဲ က I can't ကို I can ဖြစ်သွား အောင် လုပ်လိုက်ပါလား မိတ်ဆွေ ! ============================================================================== ပါဝါ ဟန်းနီး ( 100% သဘာဝ ဆေး ) အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ********************************************* ■ ပန်းသေ ပန်းညိုး ပျောက်စေပါသည် ။ ■ သုတ်လွှတ် မြန်ခြင်းကို ပျောက်စေပါသည် ။ ■ ခြေဖျားမှ ဦးနှောက်အထိ ရှိသမျှ သွေးကြော အားလုံးတွင် သွေးကို လျောက်စေ သောကြောင့် အကြောအားနည်းသူများ ပိုလီယို ရောဂါ ခံစားနေရသူများ နှင့် တခြမ်းလေဖြတ် အောက်ပိုင်းသေနေသူများ ပုံမှန် အသုံးပြုပေးပါက ရောဂါ သက်သာစေရန် များစွာ အထောက်အကူ ပြုသည် ။ ■ သုတ်ကောင်အရည်အတွက် ပွားစေပြီး သုတ် အရည်အသွေးကိုပါ မြင့်တင်ပေးသောကြောင့် ကျန်းမာ သန်စွမ်း ဥာဏ်ကောင်းသော ကလေး ရလိုသူများ Course အလိုက် မှီဝဲ နိုင်ပါသည် ။ ■ သွေးကို တကိုယ်လုံးတွင် ကောင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင် ပေးသဖြင့် စိတ်ပါသလောက် ကိုယ်က လိုက်ပါ ပြီး မမောတန်း တခါပြီး တခါ ဆက်တိုက် စွမ်းဆောင် နိုင်သည် ။ ■ ဆက်ဆံ နေစဉ် ယောင်္ကျား အဂါင်္ ကို တောင့်တင်း သန်မာ ထွားစေသည် ။ ■ ဦးနှောက်တွင်း အနှံ့ သွေးကိုရောက်စေသဖြင့် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် ကိုပါမြင့်တင်ပေးသောကြောင့် လူ ကိုယ် ကိုသာမက စိတ်ဓာတ် ကိုပါ ယောင်္ကျား ပီသစေပါသည် ။ ■ ဆီးကြိတ် ရောင်သူများ Course အတိုင်း မှီဝဲပါက ရောဂါ ကို အထူးသက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ■ နှလုံး ရောဂါ ရှိသူများ လုံးဝ မသောက်သုံးရ ။ ဆေးမှီဝဲပုံ အညွှန်း ********** မည်သည့် ရောဂါ အတွက်မဆို တခါသောက်လျှင် ရွှေရောင်ဘူး ၃ ဘူး = One Course ပြည့်အောင် သောက်သုံးရပါမည် ။ ● ဘူးအတွင်းတွင် ဇွန်း ပါပါသည် ။ ပထမ တဘူး တရက် တဇွန်း ( ညသောက်လျှင် နေ တိုင်း ည ၊ မနက်သောက်လျှင် နေ့တိုင်း မနက် ) ၁၀ ရက် ဆက်တိုက် သောက်ရပါမည် ။ ဒုတိယ နှင့် တတိယ ဘူးများကို တရက် ခြားဆီ သောက်ရပါမည် ။ ● One Course3ဘူး သောက်ပြီးလျှင် မိမိ မူလ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းဆုံး ၆ လ မှ အများဆုံး တနှစ်ထိ မည်သည့်ဆေးမှ မှီဝဲ စရာ မလိုတော့ပါ ! ● ပိုလီယို ရောဂါ နှင့် ဆီးကြိတ် ဝေဒနာ ရှင်များ လည်း အထက်ပါ အတိုင်း ရွှေ ရောင်ဘူး ၃ လ အဖြူရောင်ဘူး ၃ လ ဆက်တိုက် တလှည့် စီ စွဲ သုံး နိုင်ပါသည် ။ ● အလွန် အားနည်းနေသူများ ရွှေရောင်ဘူး One Course သောက်ပြီး ၃ လ အထိ အဖြူရောင် POWER HONEY3ဘူးကို တရက်ခြားတဇွန်း ၃ ဘူးကုန်အောင် သောက်ပြီး ၄ လမြောက်တွင် ရွှေရောင် POWER HONEY ဘူး One Course ကို ပြန်သောက်ပေးပါ ။ ရွှေရောင် ONE COURSE ကုန်အောင်သောက်ပြီး ထူးခြားမှု နည်းသေးပါက အဖြူ ရောင် ၃ ဘူး ONE COURSE ကို သောက်ပေးရန် အထူး လိုအပ်ပါသည် ။ #### လိင် အဂါင်္ ထွားလိုသူများ ရွှေရောင် POWER HONEY3ဘူး သောက်နေစဉ် POWER LOTION2ဘူး ကုန်အောင် တွဲလိမ်း အသုံးပြုပေးပါရန် ။ ဈေးနှုန်းများ ******* POWER HONEY ( ပါဝါ ဟန်းနီး ) - တဘူး 15000 ကျပ် POWER LOTION ( ပါဝါ လိုးရှင်း ) - တဘူး 18000 ကျပ် ဆေး အာနိသင် သိသာမှု ************* ပထမ တစ်ရက် တစ်ဇွန်း သောက်လိုက်ရုံ ဖြင့် ထူးထူးခြားခြား သိသာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ! အသက် ၁၈ နှစ်မှ အသက် ၇၀ အတွင်း နှလုံးရောဂါ ရှိသူများမှအပ ကျန် အမျိုးသားတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည် ။ ############################################################# ပါဝါ လိုးရှင်း ( 100% သဘာဝ Power Lotion ) ကို အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ***************************************************************** ■ အမျိုးသား လိင် အဂါင်္ ပေါ်တွင် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လိင်အဂါင်္ အတွင်း သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး လိင်အဂါင်္ အတွင်းရှိ သွေးအိတ်ထဲသို့ သွေးအပြည့် ရောက်စေသောကြောင့် လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါ လိင်အဂါင်္ ကို နဂိုထက် ပိုကြီးထွားလာစေပါသည် ။ ■ လိင် ဆက်င်္ဆခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ကူးဆက်ရာဂါများ ကူးဆက်ခြင်းမှ 95% ကာကွယ်ပေးပါသည် ။ ■ လိင်တံကို အမြဲ သန့်ရှင်းမွှေးကြိုင်နေစေပြီး ဖြူဝင်းလာစေသောကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ( အမျိုးသမီး / ချစ်သူ ) ၏ နှစ်လိုဖွယ် ယုယုယယ စိတ်ပါ ဝင်စားစွာဖြင့် ပြုစုပေးခြင်းကို ခံရပါမည် ။ ■ ဤ လိမ်းဆေးကို စား၍ ရသော ဆေးဘက်ဝင် သဘာဝ ပစ္စည်း များဖြင့်သာ ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် မိမိအားပြုစုပေးသော ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ( အမျိုးသမီး / ချစ်သူ ) မှပြုစုပေးနေစဉ် တံထွေး မျုို ချ မိပါက ဤ ဆေး သည် ၄င်း ( အမျိုးအမီး / ချစ်သူ ) ၏ ဓမ္မတာ ကို မှန်စေ သွေးအားကောင်းစေပြီး သားအိမ်ကို သန့်စေပါသည် ။ အသားအရေကို လည်း ကြည်လင်စေပါသည် ။ ■ အကြောထိန်းအားကိုလည်း ကောင်းမွန်လာစေသောကြောင့် သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ■ လေဖြတ်ထားသူများ လေဖြတ်ထားသည့် လက် / ခြေတောက် များတွင် တရက် ၃ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးပါက နဂို ပုံမှန် ပဂတိ အခြေအနေမျိုး ပြန်ဖြစ်လာအောင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည် ။ ■ တစ်လ တစ်ကြိမ် တစ်ကိုယ်လုံး အနှံ့ လိမ်းပေးပါက လေဖြတ်ခြင်း မဖြစ်အောင် အထူး ကာကွယ် ပေးပါသည် ။ ■ ပိုလီယို ရောဂါ ဝေဒနာ ရှင်များ လည်း လိုအပ်သော နေရာတွင် လိမ်းကာ အသုံးပြုပါက နဂိုထက် သိသိသာသာ ထူးခြား သိသာလာ မည် ဖြစ်ပါသည် ။ ■ အကြောညှပ်ခြင်း ၊ အကြောကပ်ခြင်း ၊ ကျင်ခြင်း ၊ ထုံခြင်း ၊ လက်ပြင်ကြောလွဲခြင်း ၊ ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း စသည်တို့ အတွက်လည်း အသုံးပြု နိုင်ပါသည် ။ ##### လိင်တံ ကို တရက် ၃ ကြိမ် လိမ်းရန်သာ အသုံးပြုပါက POWER LOTION တဘူး တစ်လ အသုံးခံပါသည် ။ ပထမဆုံး စ အသုံးပြုသူများ POWER HONEY3ဘူး One Course သောက်နေစဉ် ရက် ၅၀ အတွင်း POWER LOTION 2ဘူး ကိုပါ တွဲလိမ်း သုံးပေးပါ ။ သို့မှသာ ဤ ၂ ဘူး ကုန်သည့်အခါ သင့် လိင် အဂါင်္ သိသိသာသာ ကြီးထွား လာပါမည် ။ နောက်ပိုင်း ဆက်သုံး လိုပါက POWER HONEY သောက်ရန် မလိုတော့ဘဲ လိုးရှင်း ချည်း သက်သက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ယခုမှ စအသုံးပြုသူများ လိုးရှင်း တခုတည်းသာ သုံးပါက သိသိသာသာ ထူးခြားမှု နည်းပါသည် ။ အထက်ပါအတိုင်း POWER HONEY3ဘူးသောက် POWER LOTION2ဘူးလိမ်း ပြီး စသုံးရပါမည် ။ ယောင်္ကျား အဂါင်္ အကြောအားနည်းခြင်းအတွက် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ကျန်ရောဂါများ အတွက် အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ တနေ့ ၃ ကြိမ် မှန်မှန် လိမ်းပြီး သုံးစွဲနိုင်ပါသည် ။ တိုင်းရင်း ဆေးဝါး မှတ်ပုံတင် အမှတ် - TMR 013306 ( 0819 ) ဈေးနှုန်း - POWER LOTION တစ်ဘူး - 18000 ကျပ် #################################################################### #################################################################### =============================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! =============================================== ရန်ကုန်တွင် ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်များ --------------------------------------------- အိမ် အရောက် မှာယူလိုက ပို့ခ 1500 ကျပ် ပေးရမည် ဖြစ်ပြီး 09 424870011 သို့ ဖုန်းဆက် မှာယူနိုင်ပါသည် ။ ■ VRS Beauty Saloon သင်္ဃန်းကျွန်း ဇဝန ဂျမ်းရှင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ■ Thiri Goldencrown Beauty Saloon 12 , မြလမ်း ၊ ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက် ၊ ဗဟန်း ■ ပန်းနု Beauty Saloon ၊ ပင်လုံလမ်း ၃၅ ရပ်ကွက် ၊ Capital အနီး ၊ မြောက်ဒဂုံ ■ ခိုင်မာလာနှင်းဆီ Beauty Saloon ၊ မင်းလမ်း ၊ စမ်းချောင်း ■ UNIQUE III Beayty Saloon , အမှတ် 38 , A -B1 , ပါရမီလမ်း ၁၆ ရပ်ကွက် ၊ စိန်ဂေဟာရှေ့ ■ Beaut'e9 Beauty Saloon - အမှတ် ၃၂ ဩဘာလမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေ ၊ Ph - 09 421021369 ■3- COLORS Saloon - အမှတ် ၃ အုတ်ပုံစိန်လမ်း ၊ လမ်းဝ မှတ်တိုင် ၊ နဝဒေး ရုပ်ရှင်ရုံအနီး ၊ မရမ်းကုန်း ၊ Ph 09 404242118 ■ မခိုင် Beauty Saloon - အမှတ် ၅၈၂ သုနန္ဒာ ၆ လမ်းဆုံ ၊ ဇ ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ၊ Ph - 09 760967761 ■ အိန်ဂျလာ Beauty Saloon - တိုက်အမှတ် ၁ ၊ အမှတ် ၁ အောင်မြင်သာစည် အိမ်ရာ ၊ ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး ၊ ကမာရွတ် Ph - 09 792233119 ■ AA Pharmacy ( ဆူးလေ ဘုရား အနီး ) ■ VICTORIA ■ SUPER ONE ■ စိမ်ဂေဟာ ■ SUPER STAR ဆေးဆိုင် ( ကုန်ဈေးတန်းလမ်း နှင့် မဟာ ဗန္မုလ လမ်းဒေါင့် ) ■ သီရိ ဆေးဆိုင် ( သမိုင်း လမ်းဆုံ ) ■ ကယား ဆေးဆိုင် ( ၃၈ လမ်း နှင့် ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်း ကြား ၊ မဟာဗန္မုလ လမ်း ■ ကံ့ကော် ဆေးဆိုင် 9/17 အနော်ရထာလမ်း ပုဇွန်တောင် ■ DH ( DAYTON HILL ) ( ရွှေအုန်းပင် အိမ်ယာ ၊ ရန်ရှင်းလမ်း ၊ အနောက်ရန်ကင်း ) ■ စံဆေးဆိုင် ( 126 ဘေး ၊ ရန်ကင်းစင်တာ ရှေ့ ) ■ ဇီဝ ဆေးဆိုင် - မဟာမြိုင် အိမ်ရာ ၊ မဟာရန်ကုန် လဖ္ဘရည်ဆိုင်ရှေ့ ၊ မြောက်ဒဂုံ ■ မိဘမေတ္တာ ဆေးဆိုင် - မြေနီကုန်း ပန်းခြံ ထဲ ■ AAA ဆေးဆိုင် ( Junction ဇဝန အနီး ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ) ■ မင်္ဂလာ ဆေးဆိုင် ( အမှတ် ၁၀၇ ၊ ရုံ ၁ ၊ နန္ဒဝန်ဈေး ၊ တောင်ဥက္ကလာ ) ■ ဆုမြတ်ထက် ဆေးဆိုင် ( ၃၆၈ မေဓာဝီ လမ်း ၊ စက္ကဝတ် လမ်းထိပ် ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ( ဈ ) ဈေး ■ ရွှေစင် ဆေးဆိုင် ( ၁၀၅၇ မောင်းမကန်လမ်း ၊ တောင်ဒဂုံ တံတားထိပ် မှတ်တိုင် ) ■ မေတ္တာရိပ် ဆေးဆိုင် ( ၁၀ မိုင်ကုန်း ဈေးတာဝန်ခံ ရုံးရှေ့ ) ■ သပြေ ဆေးဆိုင် ( အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊ ဘူတာရုံ မှတ်တိုင် အနီး ) ■ သိဒ္မိဝင် ဆေးဆိုင် ( ဆင်ရေတွင်း မှတိတိုင်အနီး ၊ အင်းစိန် လမ်းမ ) ■ မိုးသောက်ပန်း ဆေးဆိုင် ( ၁၆၁ လှိုင်မြစ်လမ်း ၊ အင်းစိန် မှတ်တိုင် အနီး ) ■ လပြည့် ဆေးဆိုင် ( စံပြ ၃ လမ်း ၊ စံပြဈေး အနီး ) ■ ကိုတင်စိုး ဆေးဆိုင် ( အာသာဝတီလမ်း ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၂ ရပ်ကွက် ) ■ ဇီဝက ဆေးဆိုင် ( ဘုရင့်နောင် လမ်း ၊ ထန်းခြောက်ပင်ကွေ့ ၊ ရွှေပြည်သာ ) ■ ချုိုမေတ္တာ ဆေးခန်း နှင့် ဆေးမျိုးစုံ ( ဗညားဒလ လမ်း ၊ အောင်မင်္ဂလာ မှတ်တိုင်အနီး ၊ တာမွေ ) ■ လေဆာ ဆေးဆိုင် ( သံလျင်ဈေး အပြင်ဘက်တန်း ၊ ORANGE ဘက် အခြမ်း ) ■ ထိပ်တန်း ဆေးဆိုင် ( ၁၇၉ အောက်ကြည့်မြင်တိုင် လမ်း ၊ အလုံ ) ■ ရွှေစင် ဆေးဆိုင် ( ၄၄ ကျားကွက်သစ်လမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေ ) ■ ထွန်းမြင့်ဦး ဆေးဆိုင် ( ၇၆၅ မဟာ ဗန္မုလလမ်း ၊ လမ်းမတော် ) ■ ပွင့်ကို ဆေးဆိုင် ( အမှတ် ၂ ယမုံနာ ဆိုင်ခန်း ၊ မြို့ နယ် တရားရုံး ရှေ့ ၊ ဒေါပုံ ) ■ စိန်စီ ဆေး နှင့် စတိုး ( 3B ဧရာဝဏ် လမ်း ၊ သာကေတ အဝိုင်း အနီး ) ■ သိဒ္မိဝင် ဆေးဆိုင် ( ၇၉ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ ဘဝမြင့် ၊ လေးထောင့်ကန် ရပ်ကွက် ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ) ■ စိုပြေ ဆေးဆိုင် ( အောင်စေ ဘုရားလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး ရပ်ကွက် ၊ မင်္ဂလာဒုံ ) ■ ရွှေရင်အေး ဆေးဆိုင် ( ၆၁၇ ခ ၊ အလောင်းဘုရားလမ်း ၊ ၁၉ ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်သာယာ ) ■ မြင့်စေတနာ ဆေးဆိုင် အမှတ် ၈၇ ၊ ဝေဟင်လမ်း ၊ ဝေဘာဂီ ၄ ရပ်ကွက် ၊ အနန်းပင် ဈေးအနီ ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ၊ 09 790196929 ■ မိသားစု Mart များ အားလုံး ■ မေတ္တာဦး ဆေးဆိုင် အမှတ် ၅၆ ၊ ကျိုက်ဝိုင်း ဘုရားလမ်း ၊ ၃ ရပ်ကွက် မရမ်းကုန်း ■ ဥမ္မာစတိုး လှည်းတန်း ■ ကိန္နရီစတိုး လှည်းတန်း ■ Asialight Marts ■ ယုဇန ပလာဇာ ပထမထပ်မှ အလှကုန် ဆိုင်များ ■ Easyshop ယုဇန ပလာဇာ တတိယထပ် ■ ရွှေကမ္ဘာ ယုဇန ပလာဇာ ဒုတိယ ထပ် ■ ပွင့်သစ်ထွန်း (၃) ဆေးဆိုင် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ မီးခွက်ဈေး ၊ အ.မ.က ၂၂ ကျောင်းရှေ့၊ လှိုင်သာယာ *************************************************** မန္တလေး တွင် ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်မျာ: ------------------------------------------------------------- အိမ်းအရောက်ပို မှာယူလိုပါက ဝန်ဆောင်ခ ကျပ် 1000 ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး 09 766005064 သို့ ဖုန်းဆက် မှာယူနိုင်ပါသည် ။ ■ SKY LARK Shop ( ပင်ရင်း ) - ရန်ကင်းလမ်း သွယ် ၊ မုန်တိုင်း ဓမ္မာရုံ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၊ ၁၉ လမ်း ၊ နန်းရှေ့ ■ ရွက်နု ဆေးဆိုင် ၆၉ လမ်း ၊ ၃၆ - ၃၇ ကြား ၊ မဟာမြိုင် လမ်းမကြီး ■ New Life - 12 လမ်း မြောက်ပြင် ■ ဆုမြတ် ဆေးဆိုင် ၁၉ လမ်း ၈၆ - ၈၇ ကြား ■ မင်းထက် ဆေးဆိုင် ၇ × ၈ ကြား ၊ ၇၆ လမ်း စည်သာလမ်း ■ ရွှေယုစံ ဆေးဆိုင် - ၁၉လမ်း မြောက်ပြင် / ၇၃ လမ်း ၃၇ - ၃၈ ကြား ■ တိမ်လွှာ - ၆၉ လမ်း ၊ ၄၁ - ၄၂ ကြား ■ အေးမေတ္တာ - ၅၈ လမ်း ၊ မနော်ဟရီ နဲ့ နှင်းဆီလမ်းကြား ■ ရာပြည့်ကျော် - ၇၆ လမ်း ၊ ၁၀ - ၁၁ ကြား ၊ အနောက်ပြင် ■ KL ဆေးဆိုင် ရွှေနဂါးဆေးဆိုင် - ၃၅ လမ်း ၊ ၇၃ - ၇၄ ကြား ■ စိမ်းလန်း ဆေးဆိုင် - စက်မှု စံပြ လမ်း ၊ ၆၂ - ၆၃ ကြား ■ အားမာန်သစ် ဆေးဆိုင် - 26 လမ်း ၊ 89 - 90 ကြား ■ သီတာနွယ် ဆေးဆိုင် - 31 လမ်း ၊ 82 - 83 ကြား ■ လေပြေ ဆေးဆိုင် - 62 လမ်း ၊ သဇင် နှင့် ငုဝါ လမ်းကြား ၊ ကုတင် 300 ရှေ့ ■ ဂြိုလ်တု ဆေးဆိုင် - 19 လမ်း ၊ 81 - 82 ကြား ■ စိန်မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် - လမ်း 30 ၊ ဆေးရုံကြီး ရှေ့ ■ စန္ဒီ ဆေးဆိုင် - 26 လမ်း ၊ 64 - 65 ကြား ■ မြင့်မိုရ်ဦး ဆေးဆိုင် - လမ်း 30 ၊ 74 - 75 ကြား ■ အောင်ကျော် ဆေးဆိုင် - 62 လမ်း ၊ စွယ်တော်လမ်း နှင့် သရဖီလမ်း ကြား ၊ အရိုး အကြော ရှေ့ ■ ဇွဲသစ် ဆေးဆိုင် - 38 လမ်း 86 လမ်း ဒေါင့် ■ ဒေါ်လာ ဆေးဆိုင် - စစ်ကိုင်း - မန္တလေးလမ်း ၊ ကန်တော်ကြီး လမ်းခွဲ မရောက်မှီ ရွှေကန် မွေ့ယာ ဆိုင်ရှေ့ ■ စိန်တိုက် ဆေးဆိုင် - 41 လမ်းအောက် × မိုးကောင်းကျောင်း တောင်ဘက် ■ ပွင့်ဆန်း ဆေးဆိုင် - 62 - 63 ကြား ၊ ဖိုးဝကြီးလမ်း ၊ စက်မှုဈေး တောင်ဘက် ■ ပြည်ကျော်ကြား ဆေးဆိုင် - လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဆိုင် နှင့်တွဲလျက် ၊ အုန်းချော ၊ မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင် ကားလမ်းမဘေး 09 2216489 ■ ရိုင်းနောင်နောင် ဆေးနှင့် ကုန်စုံဆိုင် - 68 - 69 ကြား ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း ၊ ပြည်ကြီး တခွန် ၁ ရပ်ကွက် ။ ■ ညီညီ ဆေးဆိုင် - 41 လမ်း အနောက်ထိပ် ၊ မိုးကောင်းကျောင်းရှေ့ ၊ စိန်ပန်း ။ ■ ရွှေဒေါင်းဆေးဆိုင် - 81 လမ်း ၊ 39 × 40 ကြား ■ ငြိမ်းချမ်း ဆေးဆိုင် - အမှတ် ၂၃ ဘူတာ တိုက်တန်း ၊ 09 798935379 ■ ဦးဟန်တင် - 75 လမ်း ၊ 26 - 27 ကြား ■ Pwint Pwint - 31လမ်း ၊ 81 - 82 ကြား 09 91009677 ■ Swam Htet Aung - 69 လမ်း 38 လမ်းဒေါင့် 09 977250739 ■ Aye Myittar - 58 လမ်း မနောဟရီ ■ Sawe Taw - 58 လမ်း မနောဟရီ ■ San Phyo - 58 လမ်း 09 972776598 ■ မင်း - 58 လမ်း 02 5154737 ■ G - One - 26 လမ်း ၊ 64 - 65 ကြား 02 2844107 ■ Aye Cho & Aye Ko - 29 လမ်း 09 963188928 ■ Thabarwa - ဈေးချို 09 91035690 ■ Win Aung - စိန်ပန်း 09 797361946 ■ ကို ဟန်တင် - 29 လမ်း ၊ 75 - 76 ကြား 09 33109535 ■ Mandalay - 32 လမ်း ၊ 83 - 84 ကြား 09 444046564 ■ အောင်သရဖူ - 62 စံပြလမ်း ၊ စက်မှု 02 5153031 **************************************************************** လတ်တလော အခြား ရရှိ နိုင်သော မြို့များ ------------------------------------------- ■ ထောက်ကြံ - မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် ထောက်ကြံ လမ်းဆုံ ■ မှော်ဘီ - နွေမိုးဆောင်း ဆေးဆိုင် ( ဆတ်သွားတော ) မိန်းမလိုင်း မှတ်တိုင် ■ မော်လမြိုင် - ဦးမောင်ထူး ဆေးဆိုင် ph - 057 25966 , 057 25960 , 09 5320921 ■ မုဒုံ - မွန်ဦး ဆေးဆိုင် ph - 09 425261467 ■ သထုံ - ဒေါ်ညို ဆေးဆိုင် ph - 057 - 40370 ■ ပေါင် - ကာသား ဆေးဆိုင် ph - ■ ကျိုက်ထို - ဖိုးလပြည့် ဆေးဆိုင် ဈေးအနီး ၊ ကျောင်းရှေ့ ■ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား - ရင်ရင်ပြုံး ထမင်းဆိုင် ■ မြဝတီ - ရဲမွန် ဆေးဆိုင် ph - 09 786644412 ■ ဘားအံ - လန်းဆန်း ဆေးဆိုင် Ph - 09 8731397 ■ မိတ္ထီလာ - ကိုဝေလင်း ဆေးဆိုင် ph - 064 23678 - မဟာဆွေ ဆေးဆိုင် ၊ အရှေ့ပြင်အရပ် ၊ ဒုတိယလမ်းမတော် ၊ ရေစဉ်ကြီးအနီး ၊ 09 777434084 ■ ပျဉ်းမနား - လေလှိုင်း ဆေးဆိုင် ph - 09 8300424 - ပွဲကတော် ဆေးဆိုင်၊ မင်္ဂလာရပ် ph - 067 22658 ■ နေပြည်တော် - က္ကုစာသာယ ဆေးဆိုင် မြို့မဈေး - ထွန်းထွန်းဆေးဆိုင် သပြေကုန်းဈေး ■ တပ်ကုန်း - ကိုမျုိုးသူအောင် ph - 09 440099412 ■ ပလိပ် - အောင်ကမ္ဘာဖြိုး ပလိပ် ဈေး နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် - ကောင်းဆု ပုလိပ် ကားဆိပ်နှင့် သံလမ်းဆုံ အနီး ■ ကျိုင်းတုံ - ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဆေးဆိုင် ph - 09 5250497 ■ တာချီလိတ် - BBB ဆေးဆိုင် ph - 09 428351135 ■ ပဲခူး - ကျော်ကြားဝေ ဆေးဆိုင် ph - 09 790154650 ■ ကျောက်ဆည် - အောင်သူ ဆေးဆိုင် ph - 09 788756816 , 09 9575355456 ■ စဉ့်ကိုင် - လမင်းသာ ဆေးဆိုင် မြို့မ ရပ်ကွက် ■ စစ်ကိုင်း - ကံ့ကော် ဆေးဆိုင် ဈေးလမ်း နှင့် ချင်းစုကျောင်း ဒေါင့် - မင်းမင်း ဆေးဆိုင် ■ ရွှေဘို - ပတ္တမြား ဆေးဆိုင် ph - 075 21118 , 09 259142367 - ဂရိတ် ဆေးဆိုင် ph - 09 979277574 - ရူဘီ ဆေးဆိုင် Ph - 075 - 21118 ■ ပြည့်ဖြိုး ဆေးဆိုင် ထန်းတပင် ၊ ဇီးကုန်း 09 402595354 ■ အာကာကြည် ဆေးဆိုင် မိုးကုတ် မန္တလေး လမ်း ၊ လက်ပံလှ 09 974415452 ■ မိုးကုတ် - 09 456807704 , 086 21073 ( ဖုန်းဆက်ပြီး သွားဝယ်ပါရန် ) ■ မိုးမိတ် - ကိုကျော်ကောင်းစံ ph - 09 453661068 ■ မြစ်ကြီးနား - ဦးသန်းနိုင် Ph - 09 43021786 - ရှိန် ဆေးဆိုင် ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက် - မြတ်မွန် ဆေးဆိုင် ၊ ဝင်းသူဇာရှေ့ ၊ ဧရာဝတီဘဏ်ဘေး ■ မြစ်ကြီးနား မော်ထဲ - ဝါဝါ ဆေးဆိုင် ph - 092001958 ■ ဗန်းမော် - ထွန်းမြန်မာ ဆေးဆိုင် ph - 074 - 51285 - ချမ်းမြေ့ ဆေးဆိုင် အလယ်ရပ်ကွက် ၊ ဗန်းမော်မြို့ ph - 074 50737 ■ ကသာ - Earm Lord ဆေးဆိုင် ရပ်ကွက် ၅ ၊ လမ်းမတော်လမ်း ■ အောင်ပန်း - စုမြတ် ဆေးဆိုင် ph - 09 73501633 ■ လွိုင်ကော် - မန္တလေး ပင်ရင်း ဆေးဆိုင် ph - 09 41007968 ■ တောင်ကြီး - မြတ်သုခ ဆေးဆိုင် ဗိုလ်ချူပ်လမ်း - လင်း ဆေးဆိုင် မြို့မဈေးကြီး - တော်ဝင် ဆေးဆိုင် မြို့မဈေးကြီး - ဇွန် ဆေးဆိုင် အေးသာယာ GTI သွားသည့် လမ်းမပေါ် GTI မရောက်ခင် ■ ပြင်ဦးလွင် - ကျော် ဆေးဆိုင် ဘူတာကြီး အနီး - SB ဆေးဆိုင် ပါရမီ မလိုင်မုန့်ဆိုင် ဘေးလမ်းကြားထဲ - စုပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် ဆေးရုံကြီး ရှေ့ - ဖိုးလမင်း ဆေးဆိုင် ဗိုလ်ချူပ်လမ်း ဓာတ်ဆီဆိုင် ဒေါင့် ၊ 09 444042715 ■ ကျောက်မဲ - မင်းမင်း ဆေးဆိုင် ၅/၅၄ ပင်လုံလမ်း ၊ ဗဟိုဈေး အနောက်တောင် ဒေါင့် 09 785081236 ■ လားရှိုး - 09 36033309 ■ ချင်းရွှေဟော ( လောက်ကိုင် အနီး ) - နှင်းဧကရီ ဆေးဆိုင် 09 259665821 , 09 256034838 ■ မူဆယ် - ■ မုံရွာ - ကုမုဒြာ ဆေးဆိုင် ကျောက္ကာလမ်း ၊ မီးသတ် တိုက်တန်း ။ - စိုပြေ ဆေးဆိုင် Ph - 071 - 24245 ■ ကလေး - 073 - 21288 - ကိုဖိုးတုတ် 09 420781165 - ကိုသီဟစိုး 09 2450965 ■ တမူး - ဦးစိုးအောင် ဆေးဆိုင် ■ စစ်တွေ - 09 421744844 09 36124601 09 250149102 09 421745043 ■ ကျောက်ဖြူ - ကို ကျော်ကျော်မိုး 09 43619044 ■ ကျောက်တော် - ကိုလှဌေး 09 421760820 ■ မြောက်ဦး - 09 773110317 ■ မင်းပြား - ကို ထွန်းသိန်း 09 421714901 - ထွန်းဆေးဆိုင် 09 421721438 ■ ပေါက်တော - ဦးစောထွန်းစိန် 09 4217556380 ■ ဘူးသီးတောင် - 09 421751451 ■ မောင်းတော - ARF -409 49658034 ■ ပြည် - 09 5311961 ■ ပခုက္ကူ - ဦးစိုးလွင် Ph - 09 43206401 ■ မြိုင်မြို့ - ဆုလာဘ် ဆေးဆိုင် ( ကိုကျော်မင်းသူ ) Ph - 772592526 ■ နွားထိုကြီး - ကိုကျော်ဇင် ဆေးဆိုင် ၊ 09 420704527 ■ မြင်းခြံ - စကားဝါ ဆေးဆိုင် အေးမြသီတာဈေး တောင်ဘက် 09 2216300 - စွမ်းထက် ဆေးဆိုင် ဆေးရုံကြီး အနောက်ဘက် ၊ ဗိုလ်ချူ ပ်လမ်း 09 2215368 ■ ရေစကြို - ကိုထွန်းအောင်ကျော် 09 259728485 , 09 797799099 , 09 444744007 ■ မကွေး - နိုင်လင်း ဆေးဆိုင် ရန်ပယ်ဈေး အပြင်ဘက်(၂)ထပ်တိုက်တန်း - ရှိန်း ဆေးဆိုင် အခန်း ၁၂ B ၊ အားကစားတိုက်တန်း ၊ ဗိုလ်ချူပ်လမ်း - အာရောဂျံ ဆေးဆိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရှေ့ - ပတ္တမြား ဆေးဆိုင် အမှတ် ၁၃ ဗိုလ်ချူပ်လမ်း နှင့် အထက ၂ ဒေါင့် - တူးတူး ဆေးဆိုင် တိုင်းဆေးရုံကြီး အရှေ့ဘက် 09 401556740 ■ တောင်ငူ - 09 5352206 09 797951343 ■ ပုသိမ် - 09 422549056 09 789406608 09 263585160 ■ ဟင်္သတ - 09 794908447 09 793681823 09 451240703 ■ လပွတ္တာ - ဆိုင်အမှတ် ၂၀ ဘုရားလမ်း ၊ မြို့မဈေးထိပ် ၊ ဦးပေါ်လွင် အပ်ချူပ်ဆိုင် ၊ 09 252185212 ■ ထားဝယ် - အောင် ဆေးခန်း 09 258122762 09 25083321 ■ မြိတ် - 09 41004989 - Wai Thinzar Lwin ဦးသန်းလွင် အမှတ် ၂၂၅ (၅) လမ်း ၊ နောက်လယ်ရပ် 09 776097948 ■ ကော့သောင်း - စွမ်းထက် ဆေးဆိုင် 059 51838 #################################################
##### ရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့ လိင်မဆက်ဆံခင်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ဖို/မ လိင်အဂါင်္တွေကို ဆေးကြောရတဲ့ POWER SOAP ကျားမ ၂ဦးစလုံး အခါ ၄၀ ကျော်စီ ဆေးကြောနိုင်တဲ့ စက္ကူ ဆပ်ပြာ ဘူးကို ( 30 -4- 2018 ) ကစပြီး အောက်မှာရေးပေးထားတဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ တစ်ဘူးကို ၃၆၀၀ ကျပ် တည်း နဲ့ ဝယ်လို့ရပါပြီ ! ဒါမျိုး သောင်းချီတန် ဆေးတွေ သိန်းချီဖိုး အခမဲ့ အစမ်းပေးသုံးပြီး လက်တွေ့သိသာမှုတွေကို အင်တာဗျူုး မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေရှေ့မှာ ရဲရဲကြီးချ ပြနိုင်တာ မြန်မာ့ဆေးသမိုင်းမှ SKY LARK ကလွဲလို့ မှတပါး အခြား လုံးဝ မရှိ ပါဘူး ! အိမ်ထောင်သက် ၁၀ နှစ်ကျော်ထိ ဆေးအမျိုးမျိုးသုံး နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ကုခဲ့ပေမဲ့လည်း သားသမီးရတနာ မထွန်းကားခဲ့ တစ်ဦး ဆေးအစမ်း လာသောက် / လိမ်းရင်း အမျိုးသမီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန် ရသွားပါတယ် ! မနှစ်က မန္တလေး မှာ လုပ်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ် ရန်ကုန် မှာ လုပ်ပါတယ် ! လာမဲ့ နှစ်မှာ မော်လမြိုင် မှာ လုပ်ဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ် ! POST မှာ ခုရေးထားတာတွေ အစအဆုံး ဖတ်ပြီး အင်တာဗျူုး Video လေးကို အစအဆုံးသေသေချာချာ ကြည့်လိုက်ရင် သင့်အတွက် အများကြီး အကျိုးရှိစေရမယ် ဆိုတာကို ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ် ! အားလုံး HAPPY NEW YEAR ပါ ! အားလုံးအတွက် မင်္ဂလာရှိသော ၊ စီးပွားရေးဖြစ်သော ၊ အလှုဒါန ပြုပြီး တရားဘာဝနာပွားများ နိုင်သော နှစ်ကောင်း ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ! HAPPY NEW YER , လွတ်လပ်ရေးနေ့ ၊ ပြည်ထောင်စုနေ့ ၊ ဗိုလ်ချူ ပ်မွေးနေ့ ၊ Valetine's Day နဲ့ တပ်မတော်နေ့ တွေကို ဂုဏ်ပြု ကြိုစိုတဲ့ အနေနဲ့ လာမဲ့ မိတ်လ ကုန်အထိ SKY LARK က အောက်မှာ ရေးပြထားသလို ပရိုမိုးရှင်း လက်ဆောင်တွေ ပေးထားပါတယ် ! ■ ပါဝါဟန်းနီး ၂ ဘူးဝယ်ရင် ၁၅ မိနစ်အတွင်း အသားဖြူ ခရင်မ် မျက်နှာလိမ်း ( Face Glo ) သို့ ကိုယ်လိမ်း ( Body Glo ) သို့ ဂျိုင်းကြား ပေါင်ကြား လိမ်း ( Inner Glo ) တစ်ဘူး လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ် ■ ပါဝါဟန်းနီး တစ်ဘူး ပါဝါလိုးရှင်း တစ်ဘူး ဝယ်ရင် 13500 ကျပ်တန် ညလိမ်း အသားဖြူ အသားချော EVER GLO လိုးရှင်း တစ်ဘူး လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ် ■ ONE COURSE = ပါဝါဟန်းနီး ၃ ဘူး ပါဝါလိုးရှင်း ၂ ဘူး တခါတည်း ဝယ်ရင် 13500 ကျက်တန် Ever Glo တစ်ဘူး နဲ့ 18000 တန် အမျိုး သမီးသုံး P-V Care Gel တစ်ဘူး လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ် ##### ရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့ လိင်မဆက်ဆံခင်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ဖို/မ လိင်အဂါင်္တွေကို ဆေးကြောရတဲ့ POWER SOAP ကျားမ ၂ဦးစလုံး အခါ ၄၀ ကျော်စီ ဆေးကြောနိုင်တဲ့ စက္ကူ ဆပ်ပြာ ဘူးကို ( 12 -2- 2018 ) ကစပြီး အောက်မှာရေးပေးထားတဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ တစ်ဘူးကို ၃၆၀၀ ကျပ် တည်း နဲ့ ဝယ်လို့ရပါပြီ ! ====================================================== =============================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! =============================================== အနံ့ အသက်လုံးဝ မရှိဘဲ သန့်ရှင်း မွေးကြိုင်နေတဲ့ ယောင်္ကျား တန်ဆာ ကိုမှ မိန်းမတွေက ခံစားမှု အပြည့်အဝ နဲ့ စိတ်ပါကြတယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား ???? ကြီးတာ သေးတာထက် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်း ကျန်းမာမှု ရှိပြီး တဘက်သားရဲ့ ဆန္ဒ ကို အရင်ပြည့်ဝ ပေးနိုင်တဲ့ အထိ တောင့်ခံ နိုင်မှု ရှိဖို့က အရေးအကြီး ဆုံးပါ ! " ပါဝါ လိုးရှင်းကို စသုံးလိုက်တာနဲ့ ကူဆက်ရောဂါ အန္တရာယ် တွေအတွက် 99% စိတ်ချရမှာဖြစ်ပြီး တပတ်အတွင်း သင့် လိင်အင်္ဂါ အနံ့ အက်ကင်းစင် မွေးကြိုင်လာစေပြီး နဂိုထက် သိသိသာသာ ဖြူ ဝင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ် ! တစ်လ အတွင်း သုတ်လွှတ် မြန်တာကို ပျောက်ကင်းသွားစေမှာ ဖြစ်ပြီး ၆ လ ကနေ တစ်နှစ်အတွင်း သင့်လိင်အင်္ဂါ ကို ထွားကြိုင်း ရှည်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ! ခု လိမ်း ခု ရှည် ခု ထွားစေတဲ့ အန္တာရာယ် အင်မတန်ကြီးတဲ့ တပွဲထိုး ဆေးတွေကို ရောဂါ ဖြစ်မှာ မကြောင်ဘဲ သုံးချင်သူများ ဒီ POST ကို ကျော်သွား နိုင်ပါတယ် ! SKY LARK က တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ " ပါဝါ လိုးရှင်း " ကတော့ 100% သဘာဝ ဆေးဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝ မရှိဘဲ ရေရှည်မှာ အန္တရာယ် ကင်းကင်း နဲ့ လက်တွေ့ သိသာတယ် ဆိုတာကိုတော့ ရဲရဲကြီး အာမခံပေးနိုင်ပါတယ် ! =============================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ် လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! =============================================== " ပါဝါဟန်းနီး " သောက်သူတိုင်းက ဆေးကို အလွန်ကြိုက်ကြပြီး အနံ့ နဲ့ အဝင်ဆိုးတာ မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလာကြသူတွေ ရှိလို့ ခု အ နံ့ မွှေးပြီး အရသာလေးကောင်းအောင် ပြန်ပြု ပြင်ထားပါတယ် ! လူငယ် လူကြီး တော်တော်များများ ဟာ ခုလုပ် ခုချက်ချင်းအစွမ်းပြ ဆိုတာတွေကိုသာ ပညာမဲ့စွာ ကြိုက်နေကြလို့ ကြီး ဆေးထိုးကြ ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုဗေဒ လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းကြပြီး တစ်လလောက်ဘဲ သာယာမှုကို ရကြပြီး ဘေးထွက်ဆိုကျိုးတွေကိုမရှူမလှ ခံစားနေကြရပါတယ် ! အလကားပြောနေတာ လို့ ထင်နေရင် အဲဒါတွေကို စိတ်ကြိုက်ငွေကုန်ခံပြီး အရင် လုပ်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး ! နောက်ဆုံး ဒုက္ခတွေ အမျိုးမျိုးရောက်ပြီး ဘာတစ်ခုမှ စိတ်အလိုကျ ဖြစ်မလာဘူး ဆိုရင် ခု ပိုမို အစွမ်းထက်အောင် ပြု ပြင်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ " ပါဝါလိုးရှင်း " လိမ်းဆေးကို အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ ! ဘေးထွက် ဆိုကျိုး လုံးဝ မရှိတဲ့ 100% သဘာဝ ဆေးဖြစ်လို့ ခုလိမ်း ခုချက်ချင်းတော့ ဖြစ်မလာပါဘူး ! ဒါပေမဲ့ ၆ လ နဲ့ ၉ လ အတွင်း သင်မှန်းပြီး လိုချင်နေတဲ့ အတိုင်းအတာထက် ပိုပြီး စွမ်းရမယ် ဆိုတာတော့ လုံးဝ အာမခံပါတယ် ! တစ်သက်လုံး ဘေးကင်းပြီး စိတ်တိုင်းကျ သာယာ နိုင်ဖို့ ၉ လ လောက် အချိန်ပေးရတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘဲ တွက်တွက် တန် မှတန် ပါဘဲ ! ================================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ် လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! =============================================== ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး တည်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တည်ဆောက်ဖို့ ကောင်းမွန် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖိုမ ဆက်ဆံရေး ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး သုခ ကို ၂ ဘက်စလုံး ရကြဖို့ အထူး အရေးကြီးပါတယ် ! အဲဒီ အတွက် ၂ ဘက်စလုံးက အဓိက ဟာတွေ ကျန်းမာရေး ကောင်းနေဖို လိုအပ်ပါတယ် ! ၂ ယောက်စလုံး အမြဲ သန်. ရှင်းမွှေးကြိုင်ပြီး ကျန်းမာ သန်စွမ်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နှစ်လိုဖွယ် အဓိက ဟာတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ ? သတိ - ကျန်းမာရေး အနေနဲ့ဖတ်ပြီး ရိုင်းဆိုင်းခြင်း မပြုပါရန် အထူးမေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည် ! ယောင်္ကျားများအတွက် ************ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက် ၂၀ နဲ့ ၄၀ ကြား လူငယ် 20% နဲ့ အသက် 40 နဲ့ 60 ကြား လူလတ်ပိုင်း 80% တွေဟာ ယောင်္ကျား ဟိုမုန်းဓာတ် မှတ မှန်ကန်မှု မရှိကြတဲ့အတွက် ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်း စတဲ့ ရောဂါတွေကို ခံစားနေရပါတယ် ! အသက် ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဲလို ဖြစ်နေကြသူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း ၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း ၊ လူတောမတိုးရဲခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို အားမရခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိခြင်း ၊ အလုပ်စိတ်မဝင်စားခြင်း စတာတွေ ကို ပါ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ခံစားနေကြရပြီး ထွက်ပေါက်တွေ အနေနဲ့ တချို့က လောင်းကစားသမား ၊ တချို့က အရက်သမား ၊ တချို့ က မိန်းမ အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင်ကောင်းလာမလားဆိုပြီး KTV , Club တွေ မှာ အချိန်ကုန်ငွေကုန် ဖြုန်းသူတွေ ဖြစ်လာကြရုံမက တချို့က စိတ်ဓာတ်တွေ တအားကျပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် သွားကြတဲ့ သာဓက ဖြစ်ရပ်တွေ ကမ္ဘာတဝှမ်း မှာ အများကြီး ရှိပါတယ် ! တချို့ ယောင်္ကျားတွေက ကျန်တာတွေ အကုန်ကောင်းနေပြီး သုတ်ရည်မှာ သုတ်ကောင်အရေအတွက်ပါဝင်မှု နည်းနေလို့ ကလေး မရနိုင်တာတွေလည်း ရှိကြပါတယ် ! ခု SKY LARK က တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ထုတ်တဲ့ 100% HERBAL ( သဘာဝ ) တိုင်းရင်းဆေး " ပါဝါဟန်းနီး " က အထက်ဖော်ပြပါ ဝေဒနာ တွေ ကို ဘာမှဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေဘဲ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမဲ့ ဆေးကောင်းတလက်ပါ ! "ပါဝါ လိုးရှင်း " ကိုတော့ ယောင်္ကျာ အင်္ဂါကို အမြဲ ဖြူဝင်း မွေးကြိုင်နေစေပြီး ရောဂါ များ ကူခြင်း မှ ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် အင်္ဂါကြီးထွား သန်မာမှု ရှိရန် ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ထိမ်းနိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ! မိန်းမများအတွက် ********* ကမ္ဘာတဝှမ်း အမျိုးသမီး အများစု ဖြစ်နေကြတာကတော့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း ၊ ယားယံခြင်း နှင့် ယောင်္ကျား များနှင့် ဆက်ဆံ ခါ များလာသည့်အခါ အင်္ဂါ တွင်း နံရံများ ရော့တွဲလာကြသဖြင့် မိမိခင်ပွန်းမှ မိမိအပေါ် စိတ်ကြေနပ်မှု မရှိတော့ခြင်း စတာတွေက အဖြစ်များနေကြပါတယ် ! အဲဒါတွေ အားလုံး ကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေဖို့ " P-V Care " ကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ပြီး ခု 11 လ ပိုင်းထဲ မှာ ဈေးကွက်ထဲ စတင် ရောင်းချပေ နေပါတယ် ! နောက်မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာ P - V Care နဲ့အတူ အမျိုးသမီး အင်္ဂါက အမွေးတွေကို သဘာဝ နည်းနဲ့ အမြဲအတွက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်မဲ့ P-V clean အမွေးဖယ်ရှားဆေး ကိုပါ လက်ဆောင် ထည့်ပေးဖို စီစဉ်ထားပါတယ် ! pH - 4.5 ဖြစ်ပြီး မနက် တစ်ကြိမ် ည တစ်ကြိမ် အမျိုးသမီး အင်္ဂာ အတွင်းအပြင်မှာ လိမ်းပေးရုံနဲ့ ၄၅ ရက် အတွင်း အပျိုစင် ဘဝ က အခြေအနေ လေးကို ပြန် ပိုင်ဆိုင် နိုင်မှာပါ ! P-V Care 90ml - 18,000 ကျပ် =============================================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ============================================================== မှတ်ချက် ။ ။ အစ အဆုံး သေသေချာချာ ဖတ်ပေးပါ ! ဆေး အာနိသင် ဆေး အသုံးပြုပုံ ရရှိနိုင်သော မြို့များ ဆေးဆိုင်များ ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေး တို့တွင် အိမ်အရောက် မှာယူ လိုပါက ဆက်သွယ် ရမည့်ဖုန်းများ ...... အားလုံး အစုံအလင် အတိအကျ လိုလေးသေး မရှိ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ။ ( 10 - 10 - 2016 ) မှစပြီး မလေးရှား မှာ POWER HONEY = 80 RM , POWER LOTION = 105 RM ဝယ်လို့ရပါပြီ ! ဆက်သွယ်ရန် - Malaysia Damansara Jaya Ph - 01129043746 Malaysia Klang Ph - 0173031835 " ယောင်္ကျား အားမာန် POWER HONEY " --------------------------------------------------- တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် TMR - 013089(0118) နဲ့တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ====================================================== ယခု အခါ မြန်မာပြည် အနှံ့မြို့ ကြီးများ ရှိ ဆေးဆိုင်ကြီး များတွင် ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချ ပေးနေပြီး များမကြာမှီ မြန်မာပြည် တပြည်လုံး အနှ့ံ ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါတယ် ခင်ဗျား ! ပန်းသေ ပန်းညှိုး သုတ်လွတ်မြန်ခြင်း သွေးလည်ပတ်အား နည်းခြင်း များကို ရက်ပေါင်း ( 50 ) ၃ ဘူး သောက်ပြီး သွားသည်နှင့် လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားစေပြီး အနည်းဆုံး (6) လ မှ တစ်နှစ်အထိ ဘာဆေးမှ မှီဝဲ နေစရာ မလိုတော့ဘဲ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး သွက်လက် လန်းဆန်းသော 20 ကျော်အရွယ် လူငယ်လေးလို ပေါ့ပါး အားရှိ စေမှာဖြစ်ပါတယ် !6လ ( သို့ ) တနှစ် နေမှ လိုအပ်ပါက One Course3ဘူး ထပ်သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ! အလွန် အားနည်းပြီး နှစ်ရှည်ကြာ ပန်းသေ ပန်းညှိုး ဖြစ်နေသူများ ရွှေရောင်ဘူး ၃ ဘူး One Course သောက်ပြီးပါက အဖြူ ရောင်ဘူး One Course သောက် ရပါမည် ။ လိုအပ်သေးပါက အထက်ပါအတိုင်း တလှည့်စီ ၃ ကြိမ်ထိ သောက် နိုင်ပါသည် ။ ပြောတဲ့အတိုင်း မဖြစ်ရင် ငွေပြန်အမ်း ပါ့မယ် ! ဒီလောက်သေချာတဲ့အာမခံ ချက်ကို သင့်ကို အခြား ဘယ်ဆေးက ပေးနိုင်ပါသလဲ ??? ရပ်ကြည့် လို့ အမြတ် မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! ရန်ကုန် - 09 256070900 မန္တလေး - 09 73206348 ကိုဆက်လိုက်ပါ ! ဆိုင်တွေမှာ သွားဝယ်ချင်ရင် သင့်အိမ်နဲ့အနီးဆုံး ဆိုင်ကို ညွှန်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အိမ်အရောက်ပို့ စေချင်ရင် အိမ်အရောက် ပို့ ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ကျပ် တစ်ထောင် တည်းနဲ့ရနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား ! ပါဝါ ဟန်းနီး သောက်ဆေး တဘူး - 15000 ကျပ် ပါဝါ လိုးရှင်း လိမ်းဆေး တဘူး - 18000 ကျပ် အာမခံချက် အပြည့် အဝ ပေးထားလို့ခုဘဲ ဖုန်းဆက် စမ်းသုံး ကြည့် လိုက်ပြီး သင့်ဘဝ ထဲ က I can't ကို I can ဖြစ်သွား အောင် လုပ်လိုက်ပါလား မိတ်ဆွေ ! ============================================================================== ပါဝါ ဟန်းနီး ( 100% သဘာဝ ဆေး ) အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ********************************************* ■ ပန်းသေ ပန်းညိုး ပျောက်စေပါသည် ။ ■ သုတ်လွှတ် မြန်ခြင်းကို ပျောက်စေပါသည် ။ ■ ခြေဖျားမှ ဦးနှောက်အထိ ရှိသမျှ သွေးကြော အားလုံးတွင် သွေးကို လျောက်စေ သောကြောင့် အကြောအားနည်းသူများ ပိုလီယို ရောဂါ ခံစားနေရသူများ နှင့် တခြမ်းလေဖြတ် အောက်ပိုင်းသေနေသူများ ပုံမှန် အသုံးပြုပေးပါက ရောဂါ သက်သာစေရန် များစွာ အထောက်အကူ ပြုသည် ။ ■ သုတ်ကောင်အရည်အတွက် ပွားစေပြီး သုတ် အရည်အသွေးကိုပါ မြင့်တင်ပေးသောကြောင့် ကျန်းမာ သန်စွမ်း ဥာဏ်ကောင်းသော ကလေး ရလိုသူများ Course အလိုက် မှီဝဲ နိုင်ပါသည် ။ ■ သွေးကို တကိုယ်လုံးတွင် ကောင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင် ပေးသဖြင့် စိတ်ပါသလောက် ကိုယ်က လိုက်ပါ ပြီး မမောတန်း တခါပြီး တခါ ဆက်တိုက် စွမ်းဆောင် နိုင်သည် ။ ■ ဆက်ဆံ နေစဉ် ယောင်္ကျား အဂါင်္ ကို တောင့်တင်း သန်မာ ထွားစေသည် ။ ■ ဦးနှောက်တွင်း အနှံ့ သွေးကိုရောက်စေသဖြင့် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် ကိုပါမြင့်တင်ပေးသောကြောင့် လူ ကိုယ် ကိုသာမက စိတ်ဓာတ် ကိုပါ ယောင်္ကျား ပီသစေပါသည် ။ ■ ဆီးကြိတ် ရောင်သူများ Course အတိုင်း မှီဝဲပါက ရောဂါ ကို အထူးသက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ■ နှလုံး ရောဂါ ရှိသူများ လုံးဝ မသောက်သုံးရ ။ ဆေးမှီဝဲပုံ အညွှန်း ********** မည်သည့် ရောဂါ အတွက်မဆို တခါသောက်လျှင် ရွှေရောင်ဘူး ၃ ဘူး = One Course ပြည့်အောင် သောက်သုံးရပါမည် ။ ● ဘူးအတွင်းတွင် ဇွန်း ပါပါသည် ။ ပထမ တဘူး တရက် တဇွန်း ( ညသောက်လျှင် နေ တိုင်း ည ၊ မနက်သောက်လျှင် နေ့တိုင်း မနက် ) ၁၀ ရက် ဆက်တိုက် သောက်ရပါမည် ။ ဒုတိယ နှင့် တတိယ ဘူးများကို တရက် ခြားဆီ သောက်ရပါမည် ။ ● One Course3ဘူး သောက်ပြီးလျှင် မိမိ မူလ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းဆုံး ၆ လ မှ အများဆုံး တနှစ်ထိ မည်သည့်ဆေးမှ မှီဝဲ စရာ မလိုတော့ပါ ! ● ပိုလီယို ရောဂါ နှင့် ဆီးကြိတ် ဝေဒနာ ရှင်များ လည်း အထက်ပါ အတိုင်း ရွှေ ရောင်ဘူး ၃ လ အဖြူရောင်ဘူး ၃ လ ဆက်တိုက် တလှည့် စီ စွဲ သုံး နိုင်ပါသည် ။ ● အလွန် အားနည်းနေသူများ ရွှေရောင်ဘူး One Course သောက်ပြီး ၃ လ အထိ အဖြူရောင် POWER HONEY3ဘူးကို တရက်ခြားတဇွန်း ၃ ဘူးကုန်အောင် သောက်ပြီး ၄ လမြောက်တွင် ရွှေရောင် POWER HONEY ဘူး One Course ကို ပြန်သောက်ပေးပါ ။ ရွှေရောင် ONE COURSE ကုန်အောင်သောက်ပြီး ထူးခြားမှု နည်းသေးပါက အဖြူ ရောင် ၃ ဘူး ONE COURSE ကို သောက်ပေးရန် အထူး လိုအပ်ပါသည် ။ #### လိင် အဂါင်္ ထွားလိုသူများ ရွှေရောင် POWER HONEY3ဘူး သောက်နေစဉ် POWER LOTION2ဘူး ကုန်အောင် တွဲလိမ်း အသုံးပြုပေးပါရန် ။ ဈေးနှုန်းများ ******* POWER HONEY ( ပါဝါ ဟန်းနီး ) - တဘူး 15000 ကျပ် POWER LOTION ( ပါဝါ လိုးရှင်း ) - တဘူး 18000 ကျပ် ဆေး အာနိသင် သိသာမှု ************* ပထမ တစ်ရက် တစ်ဇွန်း သောက်လိုက်ရုံ ဖြင့် ထူးထူးခြားခြား သိသာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ! အသက် ၁၈ နှစ်မှ အသက် ၇၀ အတွင်း နှလုံးရောဂါ ရှိသူများမှအပ ကျန် အမျိုးသားတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည် ။ ############################################################# ပါဝါ လိုးရှင်း ( 100% သဘာဝ Power Lotion ) ကို အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ***************************************************************** ■ အမျိုးသား လိင် အဂါင်္ ပေါ်တွင် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လိင်အဂါင်္ အတွင်း သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး လိင်အဂါင်္ အတွင်းရှိ သွေးအိတ်ထဲသို့ သွေးအပြည့် ရောက်စေသောကြောင့် လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါ လိင်အဂါင်္ ကို နဂိုထက် ပိုကြီးထွားလာစေပါသည် ။ ■ လိင် ဆက်င်္ဆခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ကူးဆက်ရာဂါများ ကူးဆက်ခြင်းမှ 95% ကာကွယ်ပေးပါသည် ။ ■ လိင်တံကို အမြဲ သန့်ရှင်းမွှေးကြိုင်နေစေပြီး ဖြူဝင်းလာစေသောကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ( အမျိုးသမီး / ချစ်သူ ) ၏ နှစ်လိုဖွယ် ယုယုယယ စိတ်ပါ ဝင်စားစွာဖြင့် ပြုစုပေးခြင်းကို ခံရပါမည် ။ ■ ဤ လိမ်းဆေးကို စား၍ ရသော ဆေးဘက်ဝင် သဘာဝ ပစ္စည်း များဖြင့်သာ ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် မိမိအားပြုစုပေးသော ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ( အမျိုးသမီး / ချစ်သူ ) မှပြုစုပေးနေစဉ် တံထွေး မျုို ချ မိပါက ဤ ဆေး သည် ၄င်း ( အမျိုးအမီး / ချစ်သူ ) ၏ ဓမ္မတာ ကို မှန်စေ သွေးအားကောင်းစေပြီး သားအိမ်ကို သန့်စေပါသည် ။ အသားအရေကို လည်း ကြည်လင်စေပါသည် ။ ■ အကြောထိန်းအားကိုလည်း ကောင်းမွန်လာစေသောကြောင့် သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ■ လေဖြတ်ထားသူများ လေဖြတ်ထားသည့် လက် / ခြေတောက် များတွင် တရက် ၃ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးပါက နဂို ပုံမှန် ပဂတိ အခြေအနေမျိုး ပြန်ဖြစ်လာအောင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည် ။ ■ တစ်လ တစ်ကြိမ် တစ်ကိုယ်လုံး အနှံ့ လိမ်းပေးပါက လေဖြတ်ခြင်း မဖြစ်အောင် အထူး ကာကွယ် ပေးပါသည် ။ ■ ပိုလီယို ရောဂါ ဝေဒနာ ရှင်များ လည်း လိုအပ်သော နေရာတွင် လိမ်းကာ အသုံးပြုပါက နဂိုထက် သိသိသာသာ ထူးခြား သိသာလာ မည် ဖြစ်ပါသည် ။ ■ အကြောညှပ်ခြင်း ၊ အကြောကပ်ခြင်း ၊ ကျင်ခြင်း ၊ ထုံခြင်း ၊ လက်ပြင်ကြောလွဲခြင်း ၊ ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း စသည်တို့ အတွက်လည်း အသုံးပြု နိုင်ပါသည် ။ ##### လိင်တံ ကို တရက် ၃ ကြိမ် လိမ်းရန်သာ အသုံးပြုပါက POWER LOTION တဘူး တစ်လ အသုံးခံပါသည် ။ ပထမဆုံး စ အသုံးပြုသူများ POWER HONEY3ဘူး One Course သောက်နေစဉ် ရက် ၅၀ အတွင်း POWER LOTION 2ဘူး ကိုပါ တွဲလိမ်း သုံးပေးပါ ။ သို့မှသာ ဤ ၂ ဘူး ကုန်သည့်အခါ သင့် လိင် အဂါင်္ သိသိသာသာ ကြီးထွား လာပါမည် ။ နောက်ပိုင်း ဆက်သုံး လိုပါက POWER HONEY သောက်ရန် မလိုတော့ဘဲ လိုးရှင်း ချည်း သက်သက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ယခုမှ စအသုံးပြုသူများ လိုးရှင်း တခုတည်းသာ သုံးပါက သိသိသာသာ ထူးခြားမှု နည်းပါသည် ။ အထက်ပါအတိုင်း POWER HONEY3ဘူးသောက် POWER LOTION2ဘူးလိမ်း ပြီး စသုံးရပါမည် ။ ယောင်္ကျား အဂါင်္ အကြောအားနည်းခြင်းအတွက် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ကျန်ရောဂါများ အတွက် အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ တနေ့ ၃ ကြိမ် မှန်မှန် လိမ်းပြီး သုံးစွဲနိုင်ပါသည် ။ တိုင်းရင်း ဆေးဝါး မှတ်ပုံတင် အမှတ် - TMR 013306 ( 0819 ) ဈေးနှုန်း - POWER LOTION တစ်ဘူး - 18000 ကျပ် #################################################################### #################################################################### =============================================== ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ် ရမှာနော် ! =============================================== ရန်ကုန်တွင် ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်များ --------------------------------------------- အိမ် အရောက် မှာယူလိုက ပို့ခ 1500 ကျပ် ပေးရမည် ဖြစ်ပြီး 09 424870011 သို့ ဖုန်းဆက် မှာယူနိုင်ပါသည် ။ ■ VRS Beauty Saloon သင်္ဃန်းကျွန်း ဇဝန ဂျမ်းရှင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ■ Thiri Goldencrown Beauty Saloon 12 , မြလမ်း ၊ ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက် ၊ ဗဟန်း ■ ပန်းနု Beauty Saloon ၊ ပင်လုံလမ်း ၃၅ ရပ်ကွက် ၊ Capital အနီး ၊ မြောက်ဒဂုံ ■ ခိုင်မာလာနှင်းဆီ Beauty Saloon ၊ မင်းလမ်း ၊ စမ်းချောင်း ■ UNIQUE III Beayty Saloon , အမှတ် 38 , A -B1 , ပါရမီလမ်း ၁၆ ရပ်ကွက် ၊ စိန်ဂေဟာရှေ့ ■ Beaut'e9 Beauty Saloon - အမှတ် ၃၂ ဩဘာလမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေ ၊ Ph - 09 421021369 ■3- COLORS Saloon - အမှတ် ၃ အုတ်ပုံစိန်လမ်း ၊ လမ်းဝ မှတ်တိုင် ၊ နဝဒေး ရုပ်ရှင်ရုံအနီး ၊ မရမ်းကုန်း ၊ Ph 09 404242118 ■ မခိုင် Beauty Saloon - အမှတ် ၅၈၂ သုနန္ဒာ ၆ လမ်းဆုံ ၊ ဇ ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ၊ Ph - 09 760967761 ■ အိန်ဂျလာ Beauty Saloon - တိုက်အမှတ် ၁ ၊ အမှတ် ၁ အောင်မြင်သာစည် အိမ်ရာ ၊ ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး ၊ ကမာရွတ် Ph - 09 792233119 ■ AA Pharmacy ( ဆူးလေ ဘုရား အနီး ) ■ VICTORIA ■ SUPER ONE ■ စိမ်ဂေဟာ ■ SUPER STAR ဆေးဆိုင် ( ကုန်ဈေးတန်းလမ်း နှင့် မဟာ ဗန္မုလ လမ်းဒေါင့် ) ■ သီရိ ဆေးဆိုင် ( သမိုင်း လမ်းဆုံ ) ■ ကယား ဆေးဆိုင် ( ၃၈ လမ်း နှင့် ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်း ကြား ၊ မဟာဗန္မုလ လမ်း ■ ကံ့ကော် ဆေးဆိုင် 9/17 အနော်ရထာလမ်း ပုဇွန်တောင် ■ DH ( DAYTON HILL ) ( ရွှေအုန်းပင် အိမ်ယာ ၊ ရန်ရှင်းလမ်း ၊ အနောက်ရန်ကင်း ) ■ စံဆေးဆိုင် ( 126 ဘေး ၊ ရန်ကင်းစင်တာ ရှေ့ ) ■ ဇီဝ ဆေးဆိုင် - မဟာမြိုင် အိမ်ရာ ၊ မဟာရန်ကုန် လဖ္ဘရည်ဆိုင်ရှေ့ ၊ မြောက်ဒဂုံ ■ မိဘမေတ္တာ ဆေးဆိုင် - မြေနီကုန်း ပန်းခြံ ထဲ ■ AAA ဆေးဆိုင် ( Junction ဇဝန အနီး ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ) ■ မင်္ဂလာ ဆေးဆိုင် ( အမှတ် ၁၀၇ ၊ ရုံ ၁ ၊ နန္ဒဝန်ဈေး ၊ တောင်ဥက္ကလာ ) ■ ဆုမြတ်ထက် ဆေးဆိုင် ( ၃၆၈ မေဓာဝီ လမ်း ၊ စက္ကဝတ် လမ်းထိပ် ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ( ဈ ) ဈေး ■ ရွှေစင် ဆေးဆိုင် ( ၁၀၅၇ မောင်းမကန်လမ်း ၊ တောင်ဒဂုံ တံတားထိပ် မှတ်တိုင် ) ■ မေတ္တာရိပ် ဆေးဆိုင် ( ၁၀ မိုင်ကုန်း ဈေးတာဝန်ခံ ရုံးရှေ့ ) ■ သပြေ ဆေးဆိုင် ( အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊ ဘူတာရုံ မှတ်တိုင် အနီး ) ■ သိဒ္မိဝင် ဆေးဆိုင် ( ဆင်ရေတွင်း မှတိတိုင်အနီး ၊ အင်းစိန် လမ်းမ ) ■ မိုးသောက်ပန်း ဆေးဆိုင် ( ၁၆၁ လှိုင်မြစ်လမ်း ၊ အင်းစိန် မှတ်တိုင် အနီး ) ■ လပြည့် ဆေးဆိုင် ( စံပြ ၃ လမ်း ၊ စံပြဈေး အနီး ) ■ ကိုတင်စိုး ဆေးဆိုင် ( အာသာဝတီလမ်း ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၂ ရပ်ကွက် ) ■ ဇီဝက ဆေးဆိုင် ( ဘုရင့်နောင် လမ်း ၊ ထန်းခြောက်ပင်ကွေ့ ၊ ရွှေပြည်သာ ) ■ ချုိုမေတ္တာ ဆေးခန်း နှင့် ဆေးမျိုးစုံ ( ဗညားဒလ လမ်း ၊ အောင်မင်္ဂလာ မှတ်တိုင်အနီး ၊ တာမွေ ) ■ လေဆာ ဆေးဆိုင် ( သံလျင်ဈေး အပြင်ဘက်တန်း ၊ ORANGE ဘက် အခြမ်း ) ■ ထိပ်တန်း ဆေးဆိုင် ( ၁၇၉ အောက်ကြည့်မြင်တိုင် လမ်း ၊ အလုံ ) ■ ရွှေစင် ဆေးဆိုင် ( ၄၄ ကျားကွက်သစ်လမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေ ) ■ ထွန်းမြင့်ဦး ဆေးဆိုင် ( ၇၆၅ မဟာ ဗန္မုလလမ်း ၊ လမ်းမတော် ) ■ ပွင့်ကို ဆေးဆိုင် ( အမှတ် ၂ ယမုံနာ ဆိုင်ခန်း ၊ မြို့ နယ် တရားရုံး ရှေ့ ၊ ဒေါပုံ ) ■ စိန်စီ ဆေး နှင့် စတိုး ( 3B ဧရာဝဏ် လမ်း ၊ သာကေတ အဝိုင်း အနီး ) ■ သိဒ္မိဝင် ဆေးဆိုင် ( ၇၉ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ ဘဝမြင့် ၊ လေးထောင့်ကန် ရပ်ကွက် ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ) ■ စိုပြေ ဆေးဆိုင် ( အောင်စေ ဘုရားလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး ရပ်ကွက် ၊ မင်္ဂလာဒုံ ) ■ ရွှေရင်အေး ဆေးဆိုင် ( ၆၁၇ ခ ၊ အလောင်းဘုရားလမ်း ၊ ၁၉ ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်သာယာ ) ■ မြင့်စေတနာ ဆေးဆိုင် အမှတ် ၈၇ ၊ ဝေဟင်လမ်း ၊ ဝေဘာဂီ ၄ ရပ်ကွက် ၊ အနန်းပင် ဈေးအနီ ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ၊ 09 790196929 ■ မိသားစု Mart များ အားလုံး ■ မေတ္တာဦး ဆေးဆိုင် အမှတ် ၅၆ ၊ ကျိုက်ဝိုင်း ဘုရားလမ်း ၊ ၃ ရပ်ကွက် မရမ်းကုန်း ■ ဥမ္မာစတိုး လှည်းတန်း ■ ကိန္နရီစတိုး လှည်းတန်း ■ Asialight Marts ■ ယုဇန ပလာဇာ ပထမထပ်မှ အလှကုန် ဆိုင်များ ■ Easyshop ယုဇန ပလာဇာ တတိယထပ် ■ ရွှေကမ္ဘာ ယုဇန ပလာဇာ ဒုတိယ ထပ် ■ ပွင့်သစ်ထွန်း (၃) ဆေးဆိုင် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ မီးခွက်ဈေး ၊ အ.မ.က ၂၂ ကျောင်းရှေ့၊ လှိုင်သာယာ *************************************************** မန္တလေး တွင် ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်မျာ: ------------------------------------------------------------- အိမ်းအရောက်ပို မှာယူလိုပါက ဝန်ဆောင်ခ ကျပ် 1000 ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး 09 766005064 သို့ ဖုန်းဆက် မှာယူနိုင်ပါသည် ။ ■ SKY LARK Shop ( ပင်ရင်း ) - ရန်ကင်းလမ်း သွယ် ၊ မုန်တိုင်း ဓမ္မာရုံ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၊ ၁၉ လမ်း ၊ နန်းရှေ့ ■ ရွက်နု ဆေးဆိုင် ၆၉ လမ်း ၊ ၃၆ - ၃၇ ကြား ၊ မဟာမြိုင် လမ်းမကြီး ■ New Life - 12 လမ်း မြောက်ပြင် ■ ဆုမြတ် ဆေးဆိုင် ၁၉ လမ်း ၈၆ - ၈၇ ကြား ■ မင်းထက် ဆေးဆိုင် ၇ × ၈ ကြား ၊ ၇၆ လမ်း စည်သာလမ်း ■ ရွှေယုစံ ဆေးဆိုင် - ၁၉လမ်း မြောက်ပြင် / ၇၃ လမ်း ၃၇ - ၃၈ ကြား ■ တိမ်လွှာ - ၆၉ လမ်း ၊ ၄၁ - ၄၂ ကြား ■ အေးမေတ္တာ - ၅၈ လမ်း ၊ မနော်ဟရီ နဲ့ နှင်းဆီလမ်းကြား ■ ရာပြည့်ကျော် - ၇၆ လမ်း ၊ ၁၀ - ၁၁ ကြား ၊ အနောက်ပြင် ■ KL ဆေးဆိုင် ရွှေနဂါးဆေးဆိုင် - ၃၅ လမ်း ၊ ၇၃ - ၇၄ ကြား ■ စိမ်းလန်း ဆေးဆိုင် - စက်မှု စံပြ လမ်း ၊ ၆၂ - ၆၃ ကြား ■ အားမာန်သစ် ဆေးဆိုင် - 26 လမ်း ၊ 89 - 90 ကြား ■ သီတာနွယ် ဆေးဆိုင် - 31 လမ်း ၊ 82 - 83 ကြား ■ လေပြေ ဆေးဆိုင် - 62 လမ်း ၊ သဇင် နှင့် ငုဝါ လမ်းကြား ၊ ကုတင် 300 ရှေ့ ■ ဂြိုလ်တု ဆေးဆိုင် - 19 လမ်း ၊ 81 - 82 ကြား ■ စိန်မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် - လမ်း 30 ၊ ဆေးရုံကြီး ရှေ့ ■ စန္ဒီ ဆေးဆိုင် - 26 လမ်း ၊ 64 - 65 ကြား ■ မြင့်မိုရ်ဦး ဆေးဆိုင် - လမ်း 30 ၊ 74 - 75 ကြား ■ အောင်ကျော် ဆေးဆိုင် - 62 လမ်း ၊ စွယ်တော်လမ်း နှင့် သရဖီလမ်း ကြား ၊ အရိုး အကြော ရှေ့ ■ ဇွဲသစ် ဆေးဆိုင် - 38 လမ်း 86 လမ်း ဒေါင့် ■ ဒေါ်လာ ဆေးဆိုင် - စစ်ကိုင်း - မန္တလေးလမ်း ၊ ကန်တော်ကြီး လမ်းခွဲ မရောက်မှီ ရွှေကန် မွေ့ယာ ဆိုင်ရှေ့ ■ စိန်တိုက် ဆေးဆိုင် - 41 လမ်းအောက် × မိုးကောင်းကျောင်း တောင်ဘက် ■ ပွင့်ဆန်း ဆေးဆိုင် - 62 - 63 ကြား ၊ ဖိုးဝကြီးလမ်း ၊ စက်မှုဈေး တောင်ဘက် ■ ပြည်ကျော်ကြား ဆေးဆိုင် - လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဆိုင် နှင့်တွဲလျက် ၊ အုန်းချော ၊ မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင် ကားလမ်းမဘေး 09 2216489 ■ ရိုင်းနောင်နောင် ဆေးနှင့် ကုန်စုံဆိုင် - 68 - 69 ကြား ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း ၊ ပြည်ကြီး တခွန် ၁ ရပ်ကွက် ။ ■ ညီညီ ဆေးဆိုင် - 41 လမ်း အနောက်ထိပ် ၊ မိုးကောင်းကျောင်းရှေ့ ၊ စိန်ပန်း ။ ■ ရွှေဒေါင်းဆေးဆိုင် - 81 လမ်း ၊ 39 × 40 ကြား ■ ငြိမ်းချမ်း ဆေးဆိုင် - အမှတ် ၂၃ ဘူတာ တိုက်တန်း ၊ 09 798935379 ■ ဦးဟန်တင် - 75 လမ်း ၊ 26 - 27 ကြား ■ Pwint Pwint - 31လမ်း ၊ 81 - 82 ကြား 09 91009677 ■ Swam Htet Aung - 69 လမ်း 38 လမ်းဒေါင့် 09 977250739 ■ Aye Myittar - 58 လမ်း မနောဟရီ ■ Sawe Taw - 58 လမ်း မနောဟရီ ■ San Phyo - 58 လမ်း 09 972776598 ■ မင်း - 58 လမ်း 02 5154737 ■ G - One - 26 လမ်း ၊ 64 - 65 ကြား 02 2844107 ■ Aye Cho & Aye Ko - 29 လမ်း 09 963188928 ■ Thabarwa - ဈေးချို 09 91035690 ■ Win Aung - စိန်ပန်း 09 797361946 ■ ကို ဟန်တင် - 29 လမ်း ၊ 75 - 76 ကြား 09 33109535 ■ Mandalay - 32 လမ်း ၊ 83 - 84 ကြား 09 444046564 ■ အောင်သရဖူ - 62 စံပြလမ်း ၊ စက်မှု 02 5153031 **************************************************************** လတ်တလော အခြား ရရှိ နိုင်သော မြို့များ ------------------------------------------- ■ ထောက်ကြံ - မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် ထောက်ကြံ လမ်းဆုံ ■ မှော်ဘီ - နွေမိုးဆောင်း ဆေးဆိုင် ( ဆတ်သွားတော ) မိန်းမလိုင်း မှတ်တိုင် ■ မော်လမြိုင် - ဦးမောင်ထူး ဆေးဆိုင် ph - 057 25966 , 057 25960 , 09 5320921 ■ မုဒုံ - မွန်ဦး ဆေးဆိုင် ph - 09 425261467 ■ သထုံ - ဒေါ်ညို ဆေးဆိုင် ph - 057 - 40370 ■ ပေါင် - ကာသား ဆေးဆိုင် ph - ■ ကျိုက်ထို - ဖိုးလပြည့် ဆေးဆိုင် ဈေးအနီး ၊ ကျောင်းရှေ့ ■ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား - ရင်ရင်ပြုံး ထမင်းဆိုင် ■ မြဝတီ - ရဲမွန် ဆေးဆိုင် ph - 09 786644412 ■ ဘားအံ - လန်းဆန်း ဆေးဆိုင် Ph - 09 8731397 ■ မိတ္ထီလာ - ကိုဝေလင်း ဆေးဆိုင် ph - 064 23678 - မဟာဆွေ ဆေးဆိုင် ၊ အရှေ့ပြင်အရပ် ၊ ဒုတိယလမ်းမတော် ၊ ရေစဉ်ကြီးအနီး ၊ 09 777434084 ■ ပျဉ်းမနား - လေလှိုင်း ဆေးဆိုင် ph - 09 8300424 - ပွဲကတော် ဆေးဆိုင်၊ မင်္ဂလာရပ် ph - 067 22658 ■ နေပြည်တော် - က္ကုစာသာယ ဆေးဆိုင် မြို့မဈေး - ထွန်းထွန်းဆေးဆိုင် သပြေကုန်းဈေး ■ တပ်ကုန်း - ကိုမျုိုးသူအောင် ph - 09 440099412 ■ ပလိပ် - အောင်ကမ္ဘာဖြိုး ပလိပ် ဈေး နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် - ကောင်းဆု ပုလိပ် ကားဆိပ်နှင့် သံလမ်းဆုံ အနီး ■ ကျိုင်းတုံ - ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဆေးဆိုင် ph - 09 5250497 ■ တာချီလိတ် - BBB ဆေးဆိုင် ph - 09 428351135 ■ ပဲခူး - ကျော်ကြားဝေ ဆေးဆိုင် ph - 09 790154650 ■ ကျောက်ဆည် - အောင်သူ ဆေးဆိုင် ph - 09 788756816 , 09 9575355456 ■ စဉ့်ကိုင် - လမင်းသာ ဆေးဆိုင် မြို့မ ရပ်ကွက် ■ စစ်ကိုင်း - ကံ့ကော် ဆေးဆိုင် ဈေးလမ်း နှင့် ချင်းစုကျောင်း ဒေါင့် - မင်းမင်း ဆေးဆိုင် ■ ရွှေဘို - ပတ္တမြား ဆေးဆိုင် ph - 075 21118 , 09 259142367 - ဂရိတ် ဆေးဆိုင် ph - 09 979277574 - ရူဘီ ဆေးဆိုင် Ph - 075 - 21118 ■ ပြည့်ဖြိုး ဆေးဆိုင် ထန်းတပင် ၊ ဇီးကုန်း 09 402595354 ■ အာကာကြည် ဆေးဆိုင် မိုးကုတ် မန္တလေး လမ်း ၊ လက်ပံလှ 09 974415452 ■ မိုးကုတ် - 09 456807704 , 086 21073 ( ဖုန်းဆက်ပြီး သွားဝယ်ပါရန် ) ■ မိုးမိတ် - ကိုကျော်ကောင်းစံ ph - 09 453661068 ■ မြစ်ကြီးနား - ဦးသန်းနိုင် Ph - 09 43021786 - ရှိန် ဆေးဆိုင် ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက် - မြတ်မွန် ဆေးဆိုင် ၊ ဝင်းသူဇာရှေ့ ၊ ဧရာဝတီဘဏ်ဘေး ■ မြစ်ကြီးနား မော်ထဲ - ဝါဝါ ဆေးဆိုင် ph - 092001958 ■ ဗန်းမော် - ထွန်းမြန်မာ ဆေးဆိုင် ph - 074 - 51285 - ချမ်းမြေ့ ဆေးဆိုင် အလယ်ရပ်ကွက် ၊ ဗန်းမော်မြို့ ph - 074 50737 ■ ကသာ - Earm Lord ဆေးဆိုင် ရပ်ကွက် ၅ ၊ လမ်းမတော်လမ်း ■ အောင်ပန်း - စုမြတ် ဆေးဆိုင် ph - 09 73501633 ■ လွိုင်ကော် - မန္တလေး ပင်ရင်း ဆေးဆိုင် ph - 09 41007968 ■ တောင်ကြီး - မြတ်သုခ ဆေးဆိုင် ဗိုလ်ချူပ်လမ်း - လင်း ဆေးဆိုင် မြို့မဈေးကြီး - တော်ဝင် ဆေးဆိုင် မြို့မဈေးကြီး - ဇွန် ဆေးဆိုင် အေးသာယာ GTI သွားသည့် လမ်းမပေါ် GTI မရောက်ခင် ■ ပြင်ဦးလွင် - ကျော် ဆေးဆိုင် ဘူတာကြီး အနီး - SB ဆေးဆိုင် ပါရမီ မလိုင်မုန့်ဆိုင် ဘေးလမ်းကြားထဲ - စုပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် ဆေးရုံကြီး ရှေ့ - ဖိုးလမင်း ဆေးဆိုင် ဗိုလ်ချူပ်လမ်း ဓာတ်ဆီဆိုင် ဒေါင့် ၊ 09 444042715 ■ ကျောက်မဲ - မင်းမင်း ဆေးဆိုင် ၅/၅၄ ပင်လုံလမ်း ၊ ဗဟိုဈေး အနောက်တောင် ဒေါင့် 09 785081236 ■ လားရှိုး - 09 36033309 ■ ချင်းရွှေဟော ( လောက်ကိုင် အနီး ) - နှင်းဧကရီ ဆေးဆိုင် 09 259665821 , 09 256034838 ■ မူဆယ် - ■ မုံရွာ - ကုမုဒြာ ဆေးဆိုင် ကျောက္ကာလမ်း ၊ မီးသတ် တိုက်တန်း ။ - စိုပြေ ဆေးဆိုင် Ph - 071 - 24245 ■ ကလေး - 073 - 21288 - ကိုဖိုးတုတ် 09 420781165 - ကိုသီဟစိုး 09 2450965 ■ တမူး - ဦးစိုးအောင် ဆေးဆိုင် ■ စစ်တွေ - 09 421744844 09 36124601 09 250149102 09 421745043 ■ ကျောက်ဖြူ - ကို ကျော်ကျော်မိုး 09 43619044 ■ ကျောက်တော် - ကိုလှဌေး 09 421760820 ■ မြောက်ဦး - 09 773110317 ■ မင်းပြား - ကို ထွန်းသိန်း 09 421714901 - ထွန်းဆေးဆိုင် 09 421721438 ■ ပေါက်တော - ဦးစောထွန်းစိန် 09 4217556380 ■ ဘူးသီးတောင် - 09 421751451 ■ မောင်းတော - ARF -409 49658034 ■ ပြည် - 09 5311961 ■ ပခုက္ကူ - ဦးစိုးလွင် Ph - 09 43206401 ■ မြိုင်မြို့ - ဆုလာဘ် ဆေးဆိုင် ( ကိုကျော်မင်းသူ ) Ph - 772592526 ■ နွားထိုကြီး - ကိုကျော်ဇင် ဆေးဆိုင် ၊ 09 420704527 ■ မြင်းခြံ - စကားဝါ ဆေးဆိုင် အေးမြသီတာဈေး တောင်ဘက် 09 2216300 - စွမ်းထက် ဆေးဆိုင် ဆေးရုံကြီး အနောက်ဘက် ၊ ဗိုလ်ချူ ပ်လမ်း 09 2215368 ■ ရေစကြို - ကိုထွန်းအောင်ကျော် 09 259728485 , 09 797799099 , 09 444744007 ■ မကွေး - နိုင်လင်း ဆေးဆိုင် ရန်ပယ်ဈေး အပြင်ဘက်(၂)ထပ်တိုက်တန်း - ရှိန်း ဆေးဆိုင် အခန်း ၁၂ B ၊ အားကစားတိုက်တန်း ၊ ဗိုလ်ချူပ်လမ်း - အာရောဂျံ ဆေးဆိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရှေ့ - ပတ္တမြား ဆေးဆိုင် အမှတ် ၁၃ ဗိုလ်ချူပ်လမ်း နှင့် အထက ၂ ဒေါင့် - တူးတူး ဆေးဆိုင် တိုင်းဆေးရုံကြီး အရှေ့ဘက် 09 401556740 ■ တောင်ငူ - 09 5352206 09 797951343 ■ ပုသိမ် - 09 422549056 09 789406608 09 263585160 ■ ဟင်္သတ - 09 794908447 09 793681823 09 451240703 ■ လပွတ္တာ - ဆိုင်အမှတ် ၂၀ ဘုရားလမ်း ၊ မြို့မဈေးထိပ် ၊ ဦးပေါ်လွင် အပ်ချူပ်ဆိုင် ၊ 09 252185212 ■ ထားဝယ် - အောင် ဆေးခန်း 09 258122762 09 25083321 ■ မြိတ် - 09 41004989 - Wai Thinzar Lwin ဦးသန်းလွင် အမှတ် ၂၂၅ (၅) လမ်း ၊ နောက်လယ်ရပ် 09 776097948 ■ ကော့သောင်း - စွမ်းထက် ဆေးဆိုင် 059 51838 ################################################# ခေတ်မှီ တိုးတက်သော ရန်ကုန်သားများ အကြိုက် " ပါဝါ ဟန်းနီး " 11 Jan 2018 · 409K views
What's it like to be in love withalove doll? NBC Left Field finds out. NBC News 20 Jul 2018 · 6.4M views
ဦးထက်ဇော်က သူ့ သမီးလေးကိုဘာပြောမလို့လည်းမသိဘူးနော်.... ✤ မာန် (အပိုင်း-၁၈) ✤(07:10 PM)(Watch on MRTV-4 ) ✤www.pyoneplay.com/live/mrtv4
ဦးထက်ဇော်က သူ့ သမီးလေးကိုဘာပြောမလို့လည်းမသိဘူးနော်.... ✤ မာန် (အပိုင်း-၁၈) ✤(07:10 PM)(Watch on MRTV-4 ) ✤www.pyoneplay.com/live/mrtv4 MRTV-44Sep 2017 · 228K views